သူဌေးသမီး သူဌေးမယား – My Blog
သူဌေးသမီး သူဌေးမယား (စ/ဆုံး)
ခမျးနားလှပသော အိမျကွီး၏ အရှငျသခငျကတော့ “ဦးမျောကွီး”ဆိုသူဖွဈသညျ။ အသကျလေးဆယျ့ငါးနှဈလောကျမှမိနျးကလေးတဈယောကျနှငျ့အိမျထောငျကလြသေညျ။ယူထားသညျ့မိနျးမကသူ့ထကျ နှဈဆယျ့ခွောကျနှဈလောကျငယျသညျ။ကောငျမလေးက ဆယျ့ကိုးနှဈထဲကို လပိုငျးလောကျသာရောကျသေးသညျ။
အရပျက ၅ ‘ ၇ “လောကျရှိသညျ။ ခါးသေးသေးကဉျြကဉျြလေးကို ထိနျးထားသော အိုးလေးမှာလုံးပွီး တငျးနတေော့ ယောကျြားတိုငျး နှဈခါမကပွနျကွညျ့ရောကျအောငျကို တပျမကျစရာပါ။ရှမျးတရုတျမလေးဆိုတော့ အသားအရကေလညျး ဖွူဝငျးပွီးစိုလဲ့နသေညျ။နနျးသူဇာ”ဆိုတဲ့ နာမညျအတိုငျး နနျးစံပွီး ခြောမောလှပသညျ။သူမကို လိုကျသညျ့ရှယျတူကောငျလေးမြားကို စိတျမဝငျစားပဲ “ဦးမျော”ကိုမှ ပွနျခဈြမိသညျ။
အခဈြဆိုတာကလညျး ဆနျးကွယျလှသညျ။ “နနျးသူဇာ”ကိုတိုငျကလညျး ပိုကျဆံခမျြးသာသညျ။တဈဦးတညျးသောသမီးလေးဆိုတော့မိဘမြားကလညျးအလိုလိုကျသညျ။ “ဦးမျော”လို သူဌေးကွီးကို ယူလိုကျခွငျးက ပစ်စညျး ဥစ်စာကွောငျ့မဟုတျဘဲ တကယျမတ်ေတာစဈနဲ့ ခဈြလို့ယူကွတာလို့လညျး အားလုံးက နားလညျထားသညျလေ။ကုမ်ပဏီက အလုပျကိစ်စတှေ ပွီးသှားတော့အိမျကိုပဲတနျးပွနျသညျ။ကားတှကေ အရမျးရှုပျနတေော့ အိမျပွနျရောကျတာ နညျးနညျးနောကျကသြှားသညျ။
ကားကို ရပထြားပှီး အိမထြဲဝငလြိုကတြော့ ထုံစံအတိုငြးဇနီးခွောလေးက သံပရာဖွေောရြညခြှပကြလေးကိုငပြှီး စောင့နြရှောသညြ။“ဦးမြော” ကုမျပဏီမှာ အလုပကြိဈစတှမွေားနလေို့လား။ မဟုတပြါဘူး “နနြးသူဇာ”ရယြ။ လမြးမှာကားတှရှေုပနြလေို့ ပါ။“ဦမြော”ရဲ့ ဇနီးခွောလေး ဖွောပြေးတဲ့ သံပုရာဖွောရြညသြာကလြိုကရြငြ မပငပြနြးတော့ပါဘူး။ပေး..ပေး…“ဦးမြော”အရမြးသောကခြငွနြပှေီ။“နနြးသူဇာ”လှပသောမကွစြောငြးလေးခွီလိုကပြှီး…သှားအပိုတှလောပှောနတယြေ…ရော့…အမောပှသှေားအောငသြောကလြိုကတြော့။
ဒီလောကျ အလိုကျသိပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ဇနီးခြောကို ဦးမျော အလှနျပငျမွတျနိုးလှသညျ။လုပျရငျလဲ အဝတျအစားတောငျမခြှတျပေ။ ထဘီလေးလှနျပွီး အသာအယာပဲလုပျသညျ။နို့လေးတှကေိုကိုငျရငျလညျး အင်ျင်ျကြီပျေါကပဲ ဖှဖှလေးကိုငျသညျ။ယူထားတဲ့ သုံးလအတှငျးမှာ “ဦးမျော”တဈယောကျ သူ့ဇနီးခြောလေးရဲ့ ကိုယျလုံးတီးအလှအပမြားကိုမမွငျဘူးပေ။အိစကျညကျညောတဲ့မှယေ့ာပျေါမှာ ညငျညငျသာသာလေးတှဖွေငျ့ပဲ ခဈြဗြူဟာခငျးကွလသေညျ။ဒါကွောငျ့မို့လညျး “နနျးသူဇာ”က အပြိုလေးတဈယောကျလိုပဲ လှပစှာရှိနသေညျ။
အား”…အရမျးနာတာပဲ…“သူဌေးဦးကြျောငွိမျး”ရဲ့တဈဦးတညျးသောသမီးလေး “လှငျမီ့”ကို “ကိုကိုလှငျ”ဆိုသူက ကဖွုတျနခွေငျးဖွဈသညျ။“ကိုကိုလှငျ”ဆိုတာကလညျး အခွားသူမဟုတျပေ။“သူဌေးဦးကြျောငွိမျး”၏ အားကိုးရသော လူတဈယောကျဖွဈသညျ။ ပါးနပျလှနျးသော “ကိုကိုလှငျ”ကွောငျ့သာ ကုမ်ပဏီတဈခုလုံး ရပျတညျနနေိုငျခွငျးဖွဈသညျ။“ကိုကိုလှငျ”ကလညျးအသားညိုပွီး အရပျအမောငျးကောငျးကာ ယောကျြားပီသသညျ။ဆျောတှကေလညျး တဈယောကျပွီးတဈယောကျပေါသညျ။
သူ့ရဲ့ လီးကလညျး လကျသုံးလုံးလောကျတုတျပွီး အရှညျက၇”မလောကျရှိသညျ။ “လှငျမီ”အျောရတာလညျး မပွောနှငျ့ လီးကိုဂျေါသုံးလုံး တတျထားတာ နှဈပတျလောကျရှိသေးသညျ။“လှငျမီ့” အပြိုနုနုထှတျထှတျ စောကျပတျလေးက ဂျေါသုံးလုံးရဲ့ဒဏျကိုကောငျးကောငျးကွီး ခံစားနရေသညျ။ဘလှတျဘတျအားကိုကိုလှငျ”၏ ဂျေါတတျထားသောလီးညိုကွီးက ဖှေးသနျ့နတေဲ့ စောကျပတျ အသဈစကျစကျလေးထဲကို ဝငျထှကျနသေလို ဘောကလညျး “ လှငျမီ့” ရဲ့ ဖငျဝလေးမှာ “တဘကျဘကျ”နဲ့ရိုကျခကျလို့နသေညျ။
လှငျမီလေး” …“ကို” လုပျတာကို ခံလို့ကောငျးလား။ကောငျးမကောငျးတော့ မသိဘူး ဟိုထဲကအရမျးနာတယျ။ဘယျထဲကလညျးလှငျမီလေး”ရဲ့။ ခဈြစဖှယျ မကျြစောငျးလေးထိုးပွီး “စောကျပတျထဲကနာနတော”ကဲ ကနြေပျပွီလား။“ကိုကိုလှငျ”နဲ့ ကမြှပဲ သူမရဲ့နှုတျမှ တဈခါမှ မပွောဘူးတာတှေ ပွောနရေသညျ။ “ကိုကိုလှငျ” ရဲ့ လီးကွီးက သူမရဲ့ စောကျပတျလေးထဲမှာ ပွညျ့ကွပျနသေညျ။ လီးကွီး၏ ဘေးမှဖုဖုထဈထဈကလေးမြား သူမရဲ့ အစိလေးကို လာပွီးထိလိုကျတိုငျး သူမအဖို့တော့ တဈကိုယျလုံးရှိနျးဖိနျးလို့နသေညျအား…ကောငျးလိုကျတာ လှငျမီလေးရယျ”ဂျေါတကျထားတဲ့ “ကိုကိုလှငျ” လညျး အပြိုစောကျပတျလေးရဲ့တငျးကွပျတဲ့ အတှအေ့ထိအောကျမှာ ဘယျလိုမှ မထိနျးနိုငျတော့ပဲ လရညျမြား လှငျမီ့ စောကျပတျလေးထဲသို့ ပနျးထညျ့လိုကျတော့သညျ။
လှငျမီ ရော့ ကို့လီးကို ကိုငျကွညျ့လေ ဆိုပွီး လှငျမီ့ ရဲ့ လကျကလေးကို ယူပွီး ကိုကိုလှငျက သူ့၏ လီးပျေါသို့ တငျပေးလိုကျသညျ။လှငျမီလညျး အခုမှပငျ မိမိရဲ့ စောကျပတျလေးကို -ိုးသှားသော လီးကွီးကို ကိုငျမိလိုကျသညျ။ ဟော…အခုလညျး လကျထဲမှာ လီးကွီးက သူမ လကျနှငျ့ပငျ မဆနျ့ ၊ ဖုဖုထဈနဲ့ စမျးမိလို့ ငုံ့ကွညျ့လိုကျတော့ လီးရဲ့ အရပွေားထဲမှ ဖုထနတောလေးတှကေို မွငျလိုကျရသညျ။“ကို”ဒါတှကေ ဘာဖွဈထားတာလညျးဟငျ၊ အနာတှပေေါကျ နလေို့လား။အနာတှမေဟုတျပါဘူး လှငျမီလေးရဲ့လှငျမီ့ကို အာရပါးရ ခဈြခငျြလို့ တတျထားတဲ့ အလုံးလေးတှလေေ။
ဂေါလြီလို့ ခေါတြယြ လှငမြီလေးရဲ့ ဆိုပှီး ပှနတြောငလြာတဲ့လီးကှီးကိုလှငမြီ့ရဲ့စောကပြတကြလေးထဲကိုထည့သြှငြးလိုကသြညြ။ဒုတိယတဈခါထပလြုပတြော့ လှငမြီ လဲ ဂေေါလြီရဲ့ကောငြးကှောငြးကို သိသှားရပှီလေ။ လှငမြီ လညြးဒီတဈခါမှာတော့ ၃ခါလောကပြှီးသှားသညြ။ကိုကိုလှငြ့ လီးခွောငြးတဈခုလုံးလဲ လှငမြီ့ရဲ့ အရညတြှနေဲ့ စိုလတနြတောပေါ့။ ကိုကိုလှငလြညြး လှငမြီလေးခွီမှောကပြှီးတဲ့ အခွိနနြဲ့ ကှပတြိဖှဈအောငစြောင့ပြှီး သုတရြညမြွားကို လှငမြီ့အဖုတလြေးထဲသို့ ထည့လြိုကတြော့သညြ။
“တူတူတူ…တူတူတူ”ဘယျသူဆကျတာလညျးလို့ကွညျ့လိုကျတော့ သူဌေးဦးကြျောငွိမျးမှဖွဈနသေညျ။ဘာအကွောငျးကိစ်စရှိလို့မြား ဟမျးဖုနျးကို ချေါတာမသိ။အရေးကွီးတဲ့ အကွောငျးအရာ ဖွဈဖို့မြားသညျ။ကိုကိုလှငျ ဖုနျးကိုငျလိုကျပွီး လှမျးမေးလိုကျသညျ။ဆရာ ဘာအရေးကွီးကိစ်စမြားရှိလို့လဲ။အေး ရှိတယျ ကိုကိုလှငျ။ ငါတို့ရဲ့ ပွိုငျဘကျကုမ်ပဏီက သူဌေးဦးမျောကွီး မိနျးမယူထားတာ မကွာသေးဘူး။အဲဒီတော့ ကြှနျတျောဘာလုပျပေးရမလညျးဆရာ။အေးဘာလုပျရမလညျးဆိုတော့ငါပွောပွမယျ။သူ့ကိုနိုငျဖို့ ငါတို့မှာ အခြိနျကောငျးရောကျလာပွီပေါ့ကှာ။
ဟား….ဟား…ဟား….”အစီအစဉျက ဒီလိုရှိတယျကှာ…..မငျးလညျးကွညျ့ပွီးလှုပျရှားလိုကျပေါ့ကှာ……ဟား…ဟား….ဦးမျောကွီး ကုမ်ပဏီက ဘယျအခြိနျပွနျတယျဆိုတာရယျ အိမျမှာ အိမျသားတှေ ဘယျနှဈယောကျရှိလညျးဆိုတာရယျ စုံစမျးထားတယျ။ဦးမျောကွီးရဲ့ ဇနီးလေးကိုတော့ မမွငျဘူးသေးပေ။ယောကျြားကိုအရမျးခဈြတဲ့သူကိုဘယျလိုလုပျပွီး ခငျြးကပျရမလဲ ဆိုတာ တှေးရငျးနဲ့ အခြိနျတှပေဲ ကုနျလာတယျ။“ကြှီ…”“အမေ့…”ကားဘရိတျအုပျသံနှငျ့အတူ ကောငျမလေးတဈယောကျ လမျးဘေးသို့ လဲကသြှားလသေညျ။ကားကတော့ တောကျလြှောကျမောငျးပွေးသှား သညျ။ အဖွဈအပကျြက မွနျဆနျလှနျသဖွငျ့ ကိုကိုလှငျလညျး ကားနံပါတျကို မှတျထားဖို့ မသှေ့ားသညျ။ ဦးမျောကွီးတို့ အိမျကိုလာစုံစမျးရာမှ စာဗူးတောငျးသိုကျနှငျ့ တိုးနသေညျ။ ကောငျမလေးလဲကနြသေောနရောသို့သှားလိုကျသညျ။ကောငျမလေးကိုကွညျ့လိုကျတော့ လဲကသြှားလို့ ပှနျးတဲ့ ဒဏျရာကလှဲပွီး ဘာမှ မရှိပါ။။
ကောငျမလေးကတော့လနျ့သှားပွီး မနေ့သေညျ။ညီမ….ညီမ…”အငျး”ပှထေူ့ပွီး ချေါလိုကျတော့မှ သတိပွနျလညျ လာသညျ။ညီမ”သတိရလာပွီလား။ကားနဲ့တော့မတိုကျ မိပါဘူး။ “ညီမ” ဘေးကို လဲကပြွီး ပှနျးသှားတဲ့ ဒဏျရာလောကျပဲ ရှိမယျထငျတယျ။အား…”“ကြှတျ…ကြှတျ…”ကောငျမလေးက ရုတျတရကျထရပျလိုကျတော့ ဘယျနရောနာသှားလညျး မသိဘူး ညညျးညူနတေယျ။“ရရဲ့လား ဘယျနရော နာသှားတာလညျး”“ရပါတယျ”“ခွဖေမိုးကအကွောတငျသှားတာနဲ့ တူတယျ”“အိမျကဝေးသေးလား”“မဝေးတော့ပါဘူး။ရှနေ့ားလေးဆိုရောကျပွီ”“ကူညီလကျစနဲ့တော့ မထူးတော့ပါဘူး ကြှနျတျော အိမျထိလိုကျပို့ပေးပါ့မယျ”ကိုကိုလှငျ ပွောပွောဆိုဆိုနဲ့ ကောငျမလေးရဲ့ဘယျဘကျလကျမောငျးအိုးလေးကို ကိုငျပွီးကောငျမလေးရဲ့ အိမျသို့ လိုကျပို့သညျ။
ကောငျမလေးရဲ့ အိမျရှရေ့ောကျတော့ ကိုကိုလှငျ အတျောလေး အံ့သွသှားသညျ။ ကောငျမလေးရဲ့ အိမျမှာ သူအမွဲလာစုံစမျးနသေော ဦးမျောကွီးရဲ့ နအေိမျဖွဈနသေညျ။ ဒါဆို ဒီကောငျမလေးက ဦးမျောကွီး၏ အလှနျခဈြမွတျနိုးလှစှာသော ဇနီးလေးနနျးသူဇာမြား ဖွဈနမေလား။“အဒျေါကွီး ဒျေါမိုး” လာတှဲပါဦး။ဟုတျလာပါပွီ မမလေးဆိုပွီး အသကျငါးဆယျ့ငါးနှဈခနျ့ရှိမညျ့ ဒျေါမိုးဆိုသူ မိနျးမကွီးကားဂိုဒေါငျထဲမှ ထှကျလာပွီး ကောငျမလေးကို လာတှဲကာ ခမျးနားလှပသောအိမျကွီးထဲသို့ ချေါသှားသညျ။ဒီကောငျမလေးသညျ နနျးသူဇာဆိုတာ ပိုပွီးသခြောသှားသညျ။
အခုမှကောငျမလေးကို သသေခြောကွညျ့မိသညျ။တျောတျောလေးကို ခြောသညျ။အရှယျအားဖွငျ့လညျး နုနယျသညျ။ နနျးသူဇာရဲ့ အလှအပကို ကွညျ့ရငျးက ပိုပိုနှမွောလာသညျ။အဒျေါကွီး ဒဏျကွလေိမျးဆေးနဲ့ ပတျတီးလေး ယူပေးပါ့လား။ ကြှနျတျော ဆေးလိမျးပွီး ပတျတီးပါစညျးပေးသှားမယျ။“အို…မဟုတျတာ…နပေါစေ…ရပါတယျ”နောကျပွီးကမြှ ကြှနျမဘာသာ လုပျလိုကျပါ့မယျ။ဆေးတှသှေားယူနသေောအဒျေါကွီးရောကျလာသညျ။ရပါတယျဗြာ။ အားမနာပါနဲ့။“ပေး…ပေး…အဒျေါကွီး”ဆိုပွီး ကိုကိုလှငျက သှကျလကျစှာယူပွီးနနျးသူဇာ ထိုငျနသေောနရောသို့ သှားလိုကျသညျ။
စီးကှငျ့ထိုးထားသော အဝါရောငျ ကတ်တီပါဖိနပျအပါးလေးကို ညှပျစီးထားသော နနျးသူဇာ၏ ခွခြေောငျးလေးမြားမှာ ဖွူဖှေးပွီး သှယျလလြလြေးဆိုတော့ ဖှဖှလေးကိုကျခငျြစရာကောငျးလှသညျ။နနျးသူဇာစီးထားသော ဖိနပျလေးကို ကိုကိုလှငျက ခြှတျပေးပွီး ခွဖေမိုးကို ဆေးလိမျးဖို့ ပွငျလိုကျစဉျ-“အို…ရပါတယျ…ကြှနျမဖာသာ…”နနျးသူဇာရဲ့ စကားမဆုံးခငျမှာပဲ ကိုကိုလှငျက ဖိနပျလေးကို ခြှတျပွီးသှားသညျ။“အို…အားနာလိုကျတာရှငျ”“ရပါတယျ…ကိစ်စမရှိပါဘူး”ဒဏျရာသကျသာဖို့ကအဓိကပဲလေ”ပွောပွီး ခွဖေမိုးလေးကို ဆေးလိမျးပေးနသေော ကိုကိုလှငျ့ကို ကွညျ့ပွီး နနျးသူဇာတဈယောကျ အားနာတာရော စိတျလှုပျရှားတှရေောဖွဈနသေညျ။
ကွိုကျတယျဆို လကျမလေးထောငျပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။အတနျးတကျဖို့အတှကျ ကွိုးစားနလေို့ပါ။နနျးသူဇာ စိတျလှုပျရှားနစေဉျ အတှငျးမှာပဲ ကိုကိုလှငျတဈယောကျ သူမရဲ့ ခွဖေမိုးလေးကို ဆေးလိမျးပွီး ပတျတီးတောငျ စညျးပေးပွီးသှားပွီ။ ကိုကိုလှငျလညျး ပွီးသှားသညျနှငျ့ -”ကြှနျတေျာ့ကို ပွနျခှငျ့ပွုပါအုနျး”နနျးသူဇာလညျး အခုမှသတိရကာ-“အဈကို့ နာမညျက”“ကြှနျတေျာ့နာမညျက ကိုကိုလှငျပါ”“ကြှနျမနာမညျက နနျးသူဇာပါ။”နောကျလမျးကွုံရငျလညျး အိမျကိုလာလညျလို့ရပါတယျ။ လမျးကွုံမှာလညျးမဟုတျလောကျပါဘူး။ ဒီဘကျကို ရောကျဖွဈတယျဆိုရငျတော့ ဝငျခဲ့ပါ့မယျသှားလိုကျပါအုနျးမယျ”…ကိုကိုလှငျ ယဉျယဉျကြေးကြေးပွောပွီး အိမျထဲမှထှကျလာခဲ့သညျ။
အဲဒီအခြိနျကစပွီး ဦးမျောကွီးတို့ အိမျဘကျမရောကျတော့တာ တဈလခှဲလောကျရှိသှားပွီ။ နနျးသူဇာရဲ့ မကျြနှာလေးကို မွငျယောငျမိတိုငျး လှငျမီ့ကိုပဲ ချေါပွီးလိုးဖွဈနတေယျ။ ရညျးစားသကျတမျးလေးကွာလာတာနဲ့ အမြှ လှငျမီလေးလညျး လီးကိုကောငျးကောငျးစုတျတတျပွီး အောကျပေးလညျးကောငျးလာတယျ။ လှငျမီ့ဖငျကိုတော့ တဈခါမှမလိုးဘူး သေးဘူး။ ကုမ်ပဏီကို မသှားပဲ အိမျမှာပဲ ဇိမျယူရငျး စဉျးစားနမေိတယျ။“ဒေါကျ…ဒေါကျ”အခနျးတံခါးခေါကျသံကွားလို့ ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတော့ လှငျမီ ဖွဈနတေယျ။ကုမ်ပဏီကို မသှားပဲ ဒီအခနျးထဲမှာ ငွိမျ့နတေယျပေါ့။“သှားစို့” အပွငျသှားပွီးမုနျ့စားရအောငျ။“နပေါဦး ခဈြလေးရယျ”ပွောကာ လှငျမီ့ ကိုယျလုံးလေးကို ပှခြေီ့ပွီး မှယေ့ာပျေါ တငျလိုကျသညျ။
“ပွှတျ…ပွှတျ…”မှယေ့ာပျေါမှာ ထိုငျနသေော လှငျမီ့ကို ကိုကိုလှငျ က နှုတျခမျးလေးကို နမျးလိုကျပွီး…“အငျ့… ကို့ ရဲ့ လီးကို စုတျပေးအုနျး”ပွောကာ မတျတတျရပျရငျးကနေ လှငျမီ့ရဲ့ နှုတျခမျးဝဆီသို့ လီးကိုတပေ့ေးလိုကျသညျ။လှငျမီ ကလညျး ကိုကိုလှငျလုပျသမြှဆို မငွငျးပေ။ နှုတျခမျးလေးကို ဟလိုကျပွီး ပါစပျထဲ တိုးဝငျလာတဲ့ လီးကို လီးထိပျလေးစုတျလိုကျ လီးတနျကိုလြှာနဲ့ပတျဆှဲလိုကျ ဂှေးဥလေးကိုလြှာနဲ့ထိုးလိုကျ လုပျကာ အစှမျးကုနျ စုတျပွနသေညျ။
“အား…ကြှတျ…ကြှတျ…”“ကောငျးလိုကျတာ လှငျမီလေးရယျ… တျောလိုကျတာကှာ”ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျကွာအောငျစုတျခိုငျးပွီးမှ ကိုကိုလှငျက လှငျမီ့ကို မှယေ့ာပျေါမှ ဆငျးခိုငျးပွီး လေးဘကျကုနျးခိုငျးလိုကျသညျ။နောကျသို့ ပွူထှကျလာသော စောကျဖုတျလေးက ဂျေါတိုကျစားမှုကွောငျ့ နညျးနညျးကှဲနသေညျ။ ဖငျဝလေးကတော့ ပနျးရောငျသနျးပွီး ခပျစူစူလေးဆိုတော့ ကိုကိုလှငျကို ဆှဲဆောငျနသေယောငျ။ကုနျးပေးထားတဲ့ လှငျမီရဲ့ စောကျပတျလေးကို ကိုကိုလှငျ အရငျလိုးလိုကျသညျ။ လကျကို သတှေးစှတျကာ ဖငျဝလေးကိုပါ ကလိပေးနသေဖွငျ့ လှငျမီ ခဗြာ ညညျးသံလေးတှဖွေငျ့ရှိနသေညျအား…ကို…ကိုရယျ”“ဘယျလိုလုပျနတောလညျး…ဖငျဝက ယားနပွေီ”“ယားနရေငျ ကို လုပျပေးမှာပေါ့ လှငျမီလေးရဲ့”စောကျပတျထဲကနေ လီးကို“ ဗှကျ”ကနဲ ဆှဲထုတျလိုကျပွီး ဖငျဝကို တလေို့ကျသညျ။“ကို” ဘာလုပျမလို့ လဲ။
ဖငျဝကို လီးဖွငျ့တထေ့ားသဖွငျ့လှငျမီလနျ့ပွီး မေးလိုကျသညျ။ လှငျမီ့ကို ခဈြမလို့ပေါ့ပွောပွီး စောကျရညျလေးမြားနဲ့ စိုလကျနတေဲ့ လီးကို လကျဖွငျ့ထိနျးပွီး ဖငျဝလေးထဲသို့ “ဗွဈ”ကနဲနအေောငျ လီးထိပျတဈခုလုံး မွုပျသညျ အထိဖိသှငျးလိုကျသညျ။“အား…မရဘူး… နာတယျ…”လှငျမီ ရုနျးပမေယျ့ ကိုကိုလှငျက ခါးလေးကို လကျနှဈဘကျဖွငျ့ကိုငျကာထိမျးထားသဖွငျ့ ရုနျးလို့မရပေ။ မကျြရညျလေးမြားပါ ကပြွီး ထှနျ့ထှနျ့လူးခံစားနရေသညျ။ ကိုကိုလှငျကတော့ ဖငျအပြိုရညျပါ ဖကျြခှငျ့ရလိုကျ၍ အရသာကအထှတျအထိပျရောကျနသေညျ။ထှနျ့ထှနျ့လူးအောငျခံစာနရေသော လှငျမီ့ကို မညှာတာပဲ လီးကို ဖငျထဲသို့ ဝငျသညျထကျဝငျအောငျ နညျးနညျးခငျြး နှဲ့သှငျးနသေညျ။ လှငျမီကသာ နာလှနျးလို့ ငိုရှိုကျနရေတာ ဖငျဝလေးကတော့ သဘာဝအဆီလေးတှပေါ ထှကျနပွေီ။
“ဗွှတျ…ဗှကျ…”“ဘှတျ…ဘှတျ…”“ဗဈြ…ဗဈြ…”လီးမှာ တပျထားတဲ့ ဂျေါလီမြားကလညျး ကိုကိုလှငျ့ရဲ့ တဖွညျးဖွညျးခငျြး လိုးနတေဲ့ အသှငျးအထုတျတိုငျးမှာ ဖငျဝလေးကို ယားအောငျလုပျနသေဖွငျ့ လှငျမီလညျး အငိုရပျပွီး ဖငျလေးကို နောကျပဈခါ ပဈခါဖွငျ့ ဖငျကို ကောငျးကောငျးလေး ခံတတျလာလပွေီ။လှငျမီ ဖငျလေးပေးတတျတာနဲ့ ကိုကိုလှငျရဲ့ လိုးဆောငျ့ခကျြတှမွေနျလာပွီး သုတျရညျမြား လှငျမီ့ ဖငျထဲသို့ ပွညျ့လြှံအောငျ ပနျးထုတျလိုကျလသေညျ။လှငျမီလညျး ဘယျနှဈခြီ ပွီးလို့ ပွီးမှနျးတောငျ မသိတော့ပေ။ မှယေ့ာပျေါသို့ မွော့ခှကေသြှားသညျ။သူငယျခငျြးမြား ကွိုကျတယျဆိုလကျမလေးထောငျပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။ အတနျးတကျဖို့ ကွိုးစားနလေို့ပါ။ကြေးဇူးပါ။
“နနျး”“ဘယျသှားမလို့လဲ…ကားပျေါတတျလေ…လိုကျပို့ပေးမယျ”ချေါသံကွားလို့ လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ အပြိုတုနျးက ရညျးစားစကား အတငျးလိုကျပွောတဲ့ “နဝေငျး” ဆိုတဲ့သူဖွဈနသေညျ။ ပငျြးတာနဲ့ စာအုပျငှားထှကျလာမှ စိတျညဈစရာနှငျ့ ကွုံနသေညျ။ ပိုကျဆံရှိပမေယျ့စကားပွောမိုကျရိုငျးသော “နဝေငျး”ကို အရငျကတညျး “နနျးသူဇာ” ကွညျ့မရခဲ့ပါ။ ကွညျ့မရပါဘူးဆိုမှ လူရှငျးတဲ့ လမျးမှာ လာတှနေ့သေညျ။“နဝေငျး”ကားထဲကနအေပွငျ ထှကျလာတော့ သူမလညျး မတတျသာတော့ပဲ လမျးလြောကျရာမှ ရပျလိုကျပွီး ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ ပွနျပွောလိုကျသညျ။“စာအုပျသှားငှားမလို့ပါ…ရှနေ့ားဆိုရောကျတော့မှာ…မလိုကျတော့ပါဘူး” ဒီလိုပွနျဖွလေိမျ့မယျဆိုတာကို “နဝေငျး”သိနှငျ့ပွီးသား။ ဟိုတုနျးကတညျးက ငွငျးခဲ့တာ ခုခြိနျထိ။ ဒီကောငျမလေးကို သူအရမျးပိုငျခငျြခဲ့တာ။ အရမျးလိုခငျြခဲ့တာ။ ဘယျလိုမှ ကွိုးစားလို့ မရခဲ့ဘူး။ နောကျဆုံးတော့ သူ့ထကျအသကျအမြားကွီးကွီးတဲ့သူကို “နနျးသူဇာ” လကျထပျသှားသညျလေ။
“ဒါဆိုလညျး တဈခုခုသှားစားရအောငျလစေကားပွောရငျးပေါ့”“မစားတော့ပါဘူး… ပွောစရာရှိရငျ ဒီမှာပဲပွောလေ”“နနျး” အိမျထောငျကသြှားပွီးမှ ပိုလှလာတယျနျော။ “ရှငျ”ဘာစကားတှေ လာပွောနတောလညျး။နနျးသူဇာ စိတျတိုသှားသညျ။အျော အိမျထောငျကပြွီးမှ ပိုလှလာလို့ ပိုလှလာတယျပွောတာလေ။ ဘာလဲ မပွောရဘူးလား။ မငျးအဖိုးကွီးက မငျးကို တျောတျောလေး ခဈြပွထားလို့နဲ့ တူတယျ ဟား…ဟား…ဟား…ရှငျ ယုတျမာလှခညျြလား နှမသားခငျြး ကိုယျခငျြးမစာပဲ ရှငျမို့ပွောထှကျတယျ။တျောပွီရှငျနဲ့ ကမြ လုံးဝစကားပွောစရာမရှိတော့ဘူး။ “နနျးသူဇာ”ပွောပွီးလှညျ့အထှကျမှာ “နဝေငျး”က လကျကောကျဝတျကို လှမျးဆှဲလိုကျတယျ။စကားပွောမိုကျရိုငျးတဲ့အပွငအသားပါထိလာသဖွငျ့ “နနျးသူဇာ” ငွိမျမခံတော့ပေ။“ဖွနျး”ပါးကို ဖွတျရိုကျပဈလိုကျသညျ။
ရုတျတရတျဆိုတော့ “နဝေငျး”လညျးမကာမိလိုကျနိုငျတော့ ပါးကို ဖငျြးကနဲ နအေောငျ နာသှားသညျ။ စိတျလညျးတျောတျောတိုသှားသညျ။ လကျတဈဖကျက ကားတံခါးကို ဆှဲဖှငျ့ပွီး ကနျြတဈဖကျနှငျ့ “နနျးသူဇာ”ကို ကားထဲဇှတျဆှဲသှငျးသညျ။“လူယုတျမာ…ခှေးကွီး…ငါ့လကျကိုလှတျစမျးဆိုပွီး ပွောပွီး “နနျးသူဇာ” ရုနျးသညျ။ အားခငျြးမမြှ၍ “ နနျးသူဇာ” တဈယောကျ ကားတံခါးပေါကျနားသို့ ရောကျလာသညျ။လူကလညျးရှငျးနသေဖွငျ့ နနျးသူဇာ”တဈယောကျ ကူရာမဲ့ပွီး ကားပျေါတငျခံရဆော့မညျ့ အခွအေနေ ဖွဈနသေညျ။ထိုသို့ ဖွဈနစေဉျ အခြိနျအတှငျးမှာပဲ သူတို့ဖွဈပကျြနရော လမျးမပျေါသို့ လူတဈယောကျ လမျးလြောကျလာသညျကို “နနျးသူဇာ” နောကျလှညျ့ရုနျးခြိနျတှငျ မွငျတှလေို့ကျသညျ။
“ကူညီပါဦးရှငျ…ကူညီပါဦး”“နဝေငျး”လညျး ပါးစပျကို လှမျးပိတျဖို့ အခြိနျမမှီတော့ပေ။ထိုသူသညျ အနားသို့ ရောကျလာသညျ။“ညီလေး”လမျးမကွီးပျေါမှာ ဒီလိုမြိုး ကောငျမလေးတဈယောကျကိုအနိုငျကငျြ့တာမကောငျးပါဘူးကှာ။ပွပွေလေညျလညျ ဖွရှေငျးမှပေါ့။သူနဲ့ ကြှနျမ ဘာမှမဆိုငျပါဘူးရှငျ”ကြှနျမကို သကျသကျလိုကျနှောကျယှကျနတောပါ” ပွောပွီး လှညျ့အကွညျ့တှငျ နှဈယောကျစလုံး မကျြနှာခငျြးဆိုငျတော့ အံ့သွသှာသညျ။“နနျးသူဇာ”“ကိုကိုလှငျ”“မငျး ယုတျမာလှခညျြလား”“ခှပျ”“ကိုကိုလှငျ” စိတျတိုသှားပွီး “နဝေငျး”၏ မေးရိုးကို လကျသီးဖွငျ့ ပငျ့ထိုးလိုကျသညျ။ “နဝေငျး”လဲကသြှားသညျ။ ပွနျအထတှငျ အနီးရှိ အုပျနီခဲကို ကောကျကိုငျပွီး “ကိုကိုလှငျ၏ ဦးခေါငျးကို ရိုကျထညျ့လိုကျသညျ။ရိုကျပွီးတာနဲ့ ကားပျေါတတျပွီး “နငျဒီနေ့ ဖွဈတာတှကေို အကုနျမှတျထား နနျးသူဇာ။ နငျတဈခြိနျခြိနျမှာ ဒီကိစ်စအတှကျ ငါ့ပွနျပွီး လကျစာားခမြေယျ”ပွောကာ ကားကို မောငျးထှကျသှားသညျ။
“ကိုကိုလှငျ”ရဲ့ခေါငျးမှာလညျး သှေးတှတေျောတျောလေး ထှကျလာသညျ။ မိမိကွောငျ့ အခုလိုဖွဈသှားတာဆိုတော့ “နနျးသူဇာ” ဆေးထညျ့ပေးရနျ “ကိုကိုလှငျ့” ကို ချေါသှားသညျ။စဉျးစားရငျးနဲ့ ဖုနျးဖွငျ့ရေးနပေါသဖွငျ့ သညျးခံပွီး ဖတျပေးပါလို့ သူငယျခငျြးမြားကို တောငျးပနျပါတယျ။ဖတျပေးတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးပါ။“ဒျေါကွီးမိုး”လာပါဦး ဒီမှာ ကြှနျမကွောငျ့ “ကိုကိုလှငျ”ခေါငျးပေါကျသှားလို့ ဆေးထညျ့ပေးမလို့။ဆေးတှယေူလာခဲ့ပါဦး။ဒျေါကွီးမိုးလညျး ဆေးတှကေို သယျလာရငျး နနျးသူဇာကို မေးလိုကျသညျ။မမလေးရယျ ဘယျလိုမြားဖွဈလာတာတုနျး။
ဒါကွောငျ့မို့ မမလေးကို “ဒျေါကွီးမိုး” ပွောသားပဲ။“ဒျေါကွီးမိုး”ကိုယျတိုငျ စာအုပျသှားငှားပေးမယျလို့။အဲဒါတှနေောကျမှပွောပါ ဒျေါကွီးမိုး ရယျ။သူ့ကိုအရငျဆေးထညျ့ပေးရအောငျ။“အား…”“ကြှတျ…ကြှတျ…”နနျးသူဇာက ဒဏျရာကိုအရကျပွနျဖွငျ့ ဆေးလိုကျတော့ ကိုကိုလှငျ တဈယောကျ စပျသှားပွီး ညီးတှားလိုကျသညျ။တျောတျောစပျသှားတာလား ကိုကိုလှငျ။နနျးသူဇာက အနီးကပျလေးမေးလိုကျတာဆိုတော့ သငျးပြံ့သော ဂတှငျးနနျ့လေးက ကိုကိုလှငျ့ရဲ့ နှာခေါငျးဝလေးမှာ စှဲကနျြသှားသညျ။အရာအားလုံးနဲ့ပွညျစုံနပေါလား နနျးသူဇာရယျလို့ ကိုကိုလှငျ တှေးဖွဈသညျ။တျောလေးစပျသှားတာလား ကိုကိုလှငျ။
ကိုကိုလှငျလညျး အခုမှ သတိဝငျသှားပွီး…“အငျး…”ခဏကွာတော့ ဆေးထညျ့ပွီး ပတျတီးပါ စညျးပပွေီးသှားသညျ။“ကြှနျတျောသှားတော့မယျ”ပွောပွီး ထရပျလိုကျကာ ခေါငျးမူးသှားဟနျဆောငျပွီး ခေါငျးကို လကျဖွငျ့ဖိပွီး ခန်တာကိုယျကို ယိုငျပွလိုကျသညျ။နနျးသူဇာ စိုးရိမျပွီး လှမျးထိမျးလိုကျသညျ။“ဒီမှာ ခဏနားပွီးတော့ သကျသာတော့မှ သှားပါလား”ရပါတယျဗြာ ကြှနျတေျာ့အတှကျ မပူပါနဲ့။ကိုကိုလှငျ လီဆယျပွီး ပွောလိုကျသညျ။“အို မဟုတျတာရှငျ ကြှနျမကွောငျ့ အခုလိုဖွဈသှားတာပဲ”ဘာပဲဖွဈဖွဈ အခနျးတဈခနျးမှာ နားလိုကျပါ။
“ဒျေါကွီးမိုး”“ရှငျ” မမလေးဒီက အဈကို့ကို ဒျေါကွီးမိုးရဲ့ အခနျးနဲ့ ကပျရပျက တိုကျခနျးလေးထဲမှာ အနားယူဖို့ ပွငျပေးလိုကျပါနျော။ကိုကိုလှငျတဈယောကျ နနျးသူဇာအနားယူခိုငျးထားသောအခနျးထဲတှငျကုတငျပျေါလှဲနပွေီးအကွံထုတျနသေညျ။ဒီအတိုငျးဆိုသူ့ဆရာ သူဌေးကွီးဦးကြျောငွိမျး ခိုငျးထားတဲ့အတိုငျး ဆောငျရှကျနိုငျတော့မညျဖွဈသညျ။ ဒျေါကွီးမိုးအခနျးနဲ့ ကပျရပျဆိုပမေယျ့ ပကေ၂၀.၂၅လောကျကှာသညျ။ ဘာဆကျလုပျရမလညျး စဉျးစားရငျးနဲ့ မကျြစိမှိတျကာ မှိနျးနလေသေညျ။ဒျေါကွီးမိုး သူအခုဘယျလိုနသေေးလညျး။ အခနျးထဲမှာ ဒဏျရာကွောငျ့ အိပျပြျောနတေယျတဲ့တူတယျ မမလေး။ဒုက်ခပါပဲ ဦးမျောပွနျလာလို့ သူ့တှသှေ့ားရငျ ကြှနျမဖွငျ့ ဘယျလိုရှငျးပွရမလညျး မသိတော့ဘူး။ ကြှနျမကွောငျ့ဖွဈထားတာဆိုတော့ ဒီအတိုငျးပွနျလှတျဖို့လညျးမကောငျးဘူး။
ဘာလုပျရမှနျးမသိတော့ပါဘူး ဒျေါကွီးမိုးရယျ။ဆရာကွီးကတော့ ဒျေါမိုးတို့ ဘကျကိုမလာတတျတော့ မတှလေ့ောကျပါဘူး မမလေးရယျ။ တှတေ့ော့လညျး ဒျေါကွီးမိုး ရှငျးပွပေးမှာပေါ့။ကြေးဇူးပါပဲဒျေါကွီးမိုးရယျ။ညကလညျးတတေျောနပွေီ။အကောငျးစားမှယေ့ာပျေါမှာ အိပျမပြျောနိုငျသူတဈယောကျကတော့ နနျးသူဇာပငျ။ဦးမျောကွီးကတော့ သူမဘေးမှာ အိပျစကျနသေညျ။ အလုပျပနျလာလို့ ထငျသညျ တခေါခေါနှငျ့ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျနသေညျ။“ကိုကိုလှငျ သကျရောသကျသာရဲ့လားမသိဘူး။ ငါလညျး သူ့ကို အခနျးထဲ ပို့ထားပွီးမှ တဈခေါကျမှ မရောကျဖွဈဘူး။ ဒဏျရာကွောငျ့ဖြားမြားနမေလား။ ဒီအခြိနျသှားကွညျ့ရငျကောငျးမလား။
“ဆိုပွီး စဉျးစားနသေညျ။ဒဏျရာကလညျးခေါငျးမှာဆိုတော့ တဈခုခုဖွဈသှားရငျမကောငျးဘူးဆိုပွီး နောကျဆုံးတော့ သှားကွညျ့ဖို့ စိတျပိုငျးဖွတျလိုကျသညျ။ကိုကိုလှငျ့အခနျးထဲသို့ သူဌေးဦးမျောကွီးရဲ့ ဇနီးလေး ရောကျရှိလို့နသေညျ။ကိုကိုလှငျ အိပျမပြျောသေးပေ။တံခါးဖှငျ့သံ မကွားပမေယျ့ ရှူမိလိုကျတဲ့ ကိုယျသငျးနနျ့လေးက နနျးသူဇာပဲဆိုတာ အတပျသိလိုကျသညျ။အသကျရောရှိသေးရဲ့လားလို့ ကိုကိုလှငျ့ နှာခေါငျးဝကလကေို စမျးလိုကျတယျဆိုရငျပဲ။ကိုကိုလှငျ့ လကျတဈဖကျက နနျးသူဇာရဲ့ စမျးနတေဲ့ လကျကိုဆှဲပွီး နနျးသူဇာရဲ့ ကိုယျလုံးလေးကိုပါ ရငျခှငျထဲသှငျးလိုကျတယျ။“အို”နနျးသူဇာလညျး ကယျြပွနျ့တဲ့ ကိုကိုလှငျ့ရဲ့ ရငျခှငျထကျမှာ အသံတိုးတိုးလေးထှကျပွီးပါသှားတယျ။
မှိနျဖြော့တဲ့ အလငျးရောငျထဲမှာ နောကျပွီးတိတျဆိတျတဲ့ညဆိုတော့ နနျးသူဇာ ရငျတုနျသှားသညျ။ဘာလုပျရမှနျးလဲ မသိတော့။ ရုနျးလို့ကလဲမရပေ။သနျမာသောလကျမြားက မိမိ၏ ခါးသေးသေးကဉျြကဉျြလေးကို အမိအရဖတျထားသညျ။ သူမကို အဓမ်မလုပျဖို့ကွံနတောလား စဉျစားမိပွီး သူ့မကျြလုံးကို ကွညျ့လိုကျတော့ မကျြစိမှိတျထားပွီးအိပျပြျောနသေညျ။ နနျးသူဇာ လြောကျတှရေငျးနဲ့ ရငျပါဖိုလာသညျ။ သူ့ကို အခုမှသခြောကွညျ့မိသညျ အသားညိုပွီး မကျြနှာက ယောကျြားပီသသညျ။ အို… ဘာတှလြေောကျတှေးနမေိတာလညျး။နနျးသူဇာလြောကျတှေးနစေဉျအတှငျးမှာပဲ ကိုကိုလှငျက အဖြားတတျတာလိုလိုနဲ့“ခဈြတယျ နနျးရယျ…အရမျးခဈြတယျကှာဆိုပွီး” လကျတှကေလညျး ခါးကနေ ရငျနှဈမှာကိုပါ ကြူးကြျောနသေညျ။
ဒီလိုအခြိနျမြိုးလာမိတာကိုက မိမိအပွဈမှနျး နနျးသူဇာသိသညျ။ အျောလိုကျလြှငျလညျး မိမိခငျပှနျးကနိုးလာပွီး မိမိကို ဘာတှမြေားပွောလိုကျမလဲ။ နနျးသူဇာ စိုးရိမျစိတျတှဝေငျနတေဲ့ အခြိနျလေူမှာပဲ ကိုကိုလှငျက သူမကို ရငျခှငျထဲကနေ ကုတငျပျေါ လှဲလိုကျသညျ။ကိုကိုလှငျကလညျး သူ့ရငျဘကျအောကျရောကျနသေော နနျးသူဇာကို ငုံကွညျ့ရာတှငျ အခုမှ သတိရလာတဲ့ပုံဖွငျ့။“နနျး…နနျးသူဇာ”ဘယျလိုလုပျပွီး အခုလို…”“မထူးတော့ပါဘူး နနျး ရယျ”“နနျး”ကို ကိုယျခဈြတယျ”တောငျစဉျရမေရလြောကျပွောပွီး နနျးသူဇာရဲ့ နှုတျခမျးပါးလေးကို ဇှတျနမျးလိုကျတယျ။
နနျးသူဇာ ဘာမှမပွောနိုငျတော့ပေ။ ငိုရှိုကျရုံပဲ ရှိတော့သညျ။ မိမိ၏ ယောကျြားတဈယောကျသာ စပျယှကျဘူးသော စောကျဖုတျလေးကို နောကျထပျတဈယောကျက ထပျလုပျအုနျးမညျ။ ကိုယျ့ကိုယျကို မသတီတော့။ကိုကိုလှငျကတော့ နှုတျခမျးပါးလေးကို စုတျပွီးနောကျ နနျးသူဇာရဲ့ ထဘီကို လှနျကာ ဝငျးဖနျ့သောစောကျပကျလေးကို အပွတျ လြှာဖွငျ့ လကျြတော့သညျ။နနျးသူဇာမှာ ဒီလို လုပျမယျမထငျထားပေ။ သူမ၏ စောကျပတျလေးတဈခုလုံး ရိုးတိုးရှတတှေ ဖွဈကုနျသညျ။ သူမ၏ ခငျပှနျးနှငျ့ စပျယှကျတဲ့ အခါတိုငျး ရိုးရိုးတနျးတနျးသာ။အခုဟာက သိလညျးမသိပေ။ ပထမဆုံးကွုံဘူးခွငျးဖွဈသညျ။“တျောပါတော့ ရှငျ အဲဒီလို မလုပျပါနဲ့ မနတေတျလို့ပါ”ကြှနျမ ကို သနားပါဦးရှငျ”“ငရဲတှလေညျး ကွီးကုနျပါပွီရှငျ”ကိုကိုလှငျကတော့ စောကျပတျလေးကို ကကြနြန ယကျပေးနသေညျ။
စောကျမှေးလေးတှကေလညျးနုနုပါပါးလေးတှဆေိုတော့ ယကျရတာ အရသာတှနေ့သေညျ။နနျးသူဇာလညျး ငွငျးလို့သာငွငျးနတော။ ကိုကိုလှငျ့ရဲ့ လြှာဖြားလေးက အစိလေးကို လာထိလိုကျတိုငျး မသိစိတျက ဖငျလေးကို ကော့ပွီးပငျ့ ပငျ့ ပေးနမေိတာပါ။ နနျးသူဇာတဈယောကျ ကိုကိုလှငျ့ ရဲ့ လြှာဖြားလေးမှာပဲ အရလေေးမြားထှကျသှားသညျအထိ ကရြှုံးသှားသညျ။မလုပျပါနဲ့ ပွောရငျးက မိမိပွီးသှားသဖွငျ့ ကိုကိုလှငျ့ကို မကျြနှာမပွရဲလောကျအောငျ နနျးသူဇာ ရှကျသှားသညျ။ ကိုကိုလှငျလညျး နနျသူဇာပွီးသှားသဖွငျ့ လကျြနတောကို ရပျလိုကျပွီး အကွောမြားအပွိုငျးပွိုငျးထနသေော ဂျေါတပျထားသောလီးကွီးကို အရညျလေးမြားရှဲစိုနသေော နနျးသူဇာ၏စောကျပတျနုနုလေးထဲသို့ ဖိသှငျးလိုကျသညျ။
“ဗဈြ”“အား…နာတယျ မရဘူး နာတယျ”“ကှဲသှားပွီနဲ့ တူတယျ”နနျးသူဇာ၏စောကျပတျလေးကို လိုးရသညျမှာကောငျးလှသညျ။ အပြိုတဈယောကျကို လိုးရသလိုပဲ။ စီးကွပျနသေညျ။ တျောတျောလေးဖိသှငျးလိုကျမှ ဗဈြ ကနဲ အသံနှငျ့အတူ စောကျပတျလေးရှုံ့ပွီး ဝငျသှားတာ။“ဗဈြ…ဘှတျ…ဖတျ…”ဝငျထှကျသံတှနှေငျ့ ကိုကျညီစှာ ဂျေါလီမြားကလညျး နနျးသူဇာ၏ စောကျပတျနံရံနှငျ့ အစိလေးကို ပှတျဆှဲနသေညျ။နနျးသူဇာတဈယောကျ ဂျေါတှရေဲ့ ပှတျဆှဲမှုဒဏျကို ကောငျးကွီးခံစားရငျး ခါးလေးကော့တကျသှားပွီး ဒုတိအခြီမွောကျပွီးသှားပွနျသညျ။ ကိုကိုလှငျ့ရဲ့ လိုးစောငျ့ခကျြမြားလညျးမွနျလာသညျ။မွနျလာသညျနှငျ့အမြှ နနျးသူဇာလညျး“အား…နာတယျ…နာတယျ….” ဟုတိုးညှငျးစှာ ညညျးနသေညျ။
နနျးသူဇာ၏ ညညျးသံလေးကွောငျ့ ကိုကိုလှငျ့မှာ အရသာတိုးနသေညျ။“ဗှကျ…ဖှတျ”“ဒုတျ…ဘှတျ”အသံတှမြေိုးစုံထှကျနသေညျ။ကိုကိုလှငျ့၏ လီးမှာ နနျးသူဇာ၏ စောကျပတျလေး ကဉျြးကွပျပွီး ညှဈတဲ့ဒဏျကို ကွာရှညျစှာ မခံစားနိုငျတော့သလို နနျးသူဇာလညျး ဂျေါဒဏျကို ကွာရှညျစှာ မခံစားနိုငျတော့ပဲနှဈယောကျသားကာမအထှတျအထိပျကို ပွိုငျတူတကျလှမျးသှားသညျ။“အား…အငျး…” ညညျးညူရငျး နှဈသားမောဟိုကျသှားလသေညျ။နနျးသူဇာအဖို့ တဈရကျတညျးသုံးခြီပွီးသှားတာက ပထမဆုံးဖွဈကာ နုံးခြိသှားလတေော့သညျ။ဒီကာမအရသာကိုလညျး ဘယျတော့မှမပြေ့ောကျရမှာ မဟုတျပေ။မိမိ၏ အဖွဈအပကျြမြားကလညျး မကျြလှညျ့ဆနျလှသညျ။ ကွညျ့ရုံလေးလာကွညျ့တာကနေ ကိုကိုလှငျ့ရဲ့ ခဈြပှဲဆငျနှဲခွငျး ခံလိုကျရသညျ။ လူလညျးတဈကိုယျလုံးနုံးခြိသှားသညျ။
နနျးသူဇာ ပွနျဖို့ထရပျလိုကျစဉျမှာပဲ ကိုကိုလှငျ နနျးသူဇာရဲ့ ခါးကို ဖကျလိုကျသညျ။“နနျး…နနျးရယျ…”“ကို့ကို စိတျမဆိုးပါနဲ့ကှာ”“ကို ခဈြလှနျးလို့ ဖွဈသှားတာပါ”တကယျတမျးတော့ ကြှနျမမှားတာပါ။ ဒီနရောထိ လာမိတာကိုက ကြှနျမမှားတာ။ကြှနျမမှာယောကျြားရှိတယျဆိုတာကို အကွောငျးမတိုကျဆိုငျလို့ ရှငျ့ကို မပွောခဲ့တာ။“ဟငျ! ““နနျး…နနျးမှာ ယောကျြားရှိတယျ”“မယုံဘူးကှာ လုံးဝ မယုံဘူး”မကျြရညျမြားပါ ကလြာသညျအထိ ကိုကိုလှငျ သရုပျဆောငျကောငျးလှသညျ။ကြှနျမယောကျြား မနိုးသေးခငျ ကြှနျမသှားရမယျ။ ကြှနျမကို လှတျပါရှငျ။မရနနျး လုံးဝမလှတျနိုငျဘူး။ နနျး ပွောတဲ့စကားတှကေို မယုံဘူး။ ကို့ကို ခဈြတယျလို့ပွောမှ ကို လှတျပေးမယျ။
နနျးသူဇာ ဘာလုပျရမှနျးမသိတော့။ အခကျတှနေ့ပွေီ၊။ အဖွတေောငျးနတေဲ့ သူကလညျး ခုနကမှ အခဈြပှဲကို ဆငျနှဲထားတဲ့သူ။ သူမမှာလညျး သူမခဈြလို့ ယူထားတဲ့သူ။ ခေါငျးထဲမှာလညျး မူးနောကျနအေောငျရှုပျရှကျခကျနသေညျ။ခဈြတယျလို့ ပွနျမဖွရေငျ နနျးကို ကိုလှတျမပေးတော့ဘူးနျော။မပွနျလို့ကလညျးမဖွဈတော့ပေ။နနျးသူဇာနောကျဆုံးတော့ “အငျး”လို့ပွောပွီး အိပျဘကျသို့ အပွေးလေးပွနျသှားသညျ။ ကိုကိုလှငျကတော့ အခြောအလှလေးကိုလုပျခဲ့တာတှပွေနျတှရေငျး အပြျောကွီးပြျောနလေသေညျ။နနျးသူဇာလညျး မိမိယောကျြားဘေးတှငျ အိပျရငျး ကှဲသှားသောစောကျဖုတျလေးကို ကိုငျပွီး ခုနကအဖွဈပကျြတှကေို ပွနျစဉျးစားနမေိသညျ။
“ကိုကိုလှငျ့ရဲ့ လီးကွီး ကွီးသညျကိုတော့ သူမအဖုတျလေးထဲသို့ လီးဒဈကွီးတိုးဝငျလာတညျးက သိသညျ။ သူမ မသိတာက သူမရဲ့ အစိထိပျကို ပှတျဆှဲနသေောအလုံးလေးတှကေို မသိပေ။ ထိုအုံးလေးမြားကွောငျ့ သူမ သုံးကွိမျတောငျပွီးသှားရသညျ။ သူမကိုစပွီးမလုပျခငျက မရှံ့မရှာနဲ့ လြှကျပေးတာကိုတှေးလိုကျမိတော့ စောကျပတျလေးမှာ အရညျလေးမြားထှကျလာပွနျသညျ။ကိုကိုလှငျရဲ့ လိုးဆောငျ့ခကျြတှကေ သူမယောကျြားနဲ့တော့ တခွားစီပါ။ သူမယောကျြားကတော့သုံးရကျတဈခါလောကျ လေးရကျတဈခါလောကျသာ သူမကိုလုပျဖွဈသညျ။ လုပျဖွဈတိုငျးလညျး သူမမှာ အခုလိုမြိုး ပွီးတယျဆိုတာမကွုံဘူး။
ဒါကွောငျ့မို့လညျး ကာမအရသာဆိုတာ ဘာမှနျးမသိခဲ့ပါ။ ကိုကိုလှငျနဲ့တှမှေ့ ကာမအရသာကောငျးမှနျး သူမသိခဲ့ရသညျ။ ကိုကိုလှငျဆိုသော ကိုညိုခြောကို ငါ့ယောကျြားထကျမြား ခဈြမိသှားပွီလား”ဆကျပွီးမတှေးခငျြ့တော့ ဆကျတှေးလြှငျ သူမ တကယျခဈြမိသှားတော့မညျ။ဦးမျောကွီးတော့ သူမပွငျဆငျထားသော မနကျစာစားပွီး ကုမ်ပဏီသို့ သှားပွီ။ ဦးမျောကွီး ထှကျသှားတော့ ကိုကိုလှငျ့ကို မနကျစာကွှေးရနျ ဒျေါကွီးမိုးကိုမှာပွီး သူမတို့အခနျးသို့ ပွနျသှားသညျ။“ကိုကိုလှငျ”မေးလာလြှငျလညျး ခေါငျးကိုကျနတေယျပွောပေးဖို့ မှာထားခဲ့သညျ။
ဒျေါကွီးမိုးတဈယောကျ ကိုကိုလှငျ့ကို သှားချေါလာပွီး မနကျစာအတှကျ ကျောဖီနဲ့ ကွကျဥပေါငျမုနျ့ကွျော ခပြေးသညျ။ “ဒျေါကွီး”“ဟိုလေ နနျးသူဇာက လာမစားဘူးလား“ခေါငျးကိုကျလို့တဲ့အခနျးထဲမှာနားနတေယျကှဲ့”ကြှနျတျော ဒါတှမေစားတတျလို့ ဒျေါကွီး မစားတော့ပါဘူး။ ကြှနျတျော ပွနျတော့မယျ ။ ကြှနျတျောနှုတျဆကျသှားတယျလို့ ပွောပေးပါ။အို ဒီလိုလညျးဘယျဟုတျအုနျးမလဲ ငါ့တူရယျ။ တခုခုလေးစားပွီးမှသှားပေါ့။ဘာစားခငျြလို့လဲ ဒျေါကွီး သှားဝယျပေးမယျ။မုနျ့ဟငျးခါးလောကျဆိုရပါတယျ။နပေါစေ ဒျေါကွီးရယျ ကြှနျတျောပွနျရငျးနဲ့ပဲ ဝငျသောကျလိုကျပါမယျ။
အားမနာပါနဲ့ကှယျ။ ဒျေါကွီး လမျးထိပျကဆိုငျမှာ သှားဝယျလိုကျမယျ ဆိပွီး ထှကျသှားသညျ။ကိုကိုလှငျ အမှနျတကယျတော့ ညဈလိုကျခွငျးသာ။ဒျေါကွီးမိုး ထှကျသှားသညျနှငျ့ နနျးသူဇာရှိတဲ့ အခနျးကို လိုကျရှာနသေညျ။ တခါးတဈခကျြ ခပျဟဟလေးပှငျ့နသေော အခနျးကိုတှတေ့ော့ အထဲလှမျးကွညျ့လိုကျတော့ နနျးသူဇာ၏ ကြောပွငျကို မွငျလိုကျသညျ။ တဈခနျးလုံးကို ဝကွေ့ညျ့လိုကျတော့ အခနျးထဲ အလှဆငျထားသော ပစ်စညျးမြားမှာ အကောငျးစားတှကွေညျး သုံးထားမှနျးသိသာသညျ။ ကုတငျကွီးနှငျ့ မှယေ့ာကလညျး ကွညျ့လိုကျသညျနှငျ့ အိပျပဈလိုကျခငျြစရာပါ။ နနျးသူဇာက တဖကျလှညျ့အိပျနသေဖွငျ့ ကိုကိုလှငျဝငျလာသညျကို မသိလိုကျပါ။
မှယေ့ာက အိခနဲ ဖွဈသှားသဖွငျ့ နနျးသူဇာ နောကျကိုလှညျ့ကွညျ့လိုကျသညျ။“ကိုကိုလှငျ…ရှငျ ရှငျဘယျလိုလုပျပွီး ဒီအခနျးထဲဝငျလာတာလညျး”“ကို့ခဈြသူကို တှခေ့ငျြလို့ လိုကျရှာရငျးဝငျလာတာပေါ့”“ဘယျသူကရှငျ့ခဈြသူလို့ ပွောလို့လညျး”“နနျးပဲ မနညေ့က ခေါငျးညိတျပွီး ပွနျသှားတာလေ”“ကြှနျမယောကျြားနဲ့ ပွဿနာတတျမှာစိုးလို့ ခေါငျးညိတျခဲ့တာ။”“ကြှနျမတောငျပနျပါတယျရှငျ ရှငျပွနျပါတော့” နနျးသူဇာ နောကျထပျစကားတှေ ထပျမပွောနိုငျအောငျ နနျးသူရဲ့ နီစှေးနှုတျခမျးလေးကို ကိုကိုလှငျ ငုံစုတျလိုကျသညျ။ နနျးသူရဲ့ လြာလေးကိုလညျး သူ့လြာနှငျ့ ပှတျတိုကျလိုကျသညျ။
နနျသူဇာ “အှနျး…အှနျး…”နှငျ့ ဖွဈသှားသညျ။ကိုကိုလှငျ့ရဲ့ လကျတှကေလညျး နနျးသူဇာရဲ့ နို့လေးတှကေို အင်ျကြီပျေါမှ ဆုပျနယျပေးသညျ။ နနျးသူဇာရဲ့ ရငျသားလေးတှကေ တငျးရငျးပွီးကိုငျလို့ ကောငျးလှသညျ။နို့လေးတှကေိုငျရငျး အားမရတာနဲ့ အပျေါအင်ျင်ျကြီကို ခြှတျလိုကျသညျ။ဝငျးမှတျနတေဲ့ ရငျသားလေးနဲ့ ပနျးရောငျသနျးနတေဲ့ နို့သီးခေါငျးလေးကို မွငျလိုကျရတော့ ကြုကြုလှငျမနနေိုငျတော့ပေ။“ပွှတျ…ပွှတျ…”“ပလကျ … ပလကျ…”ရငျသားတှကေိ ယကျလိုကျ နို့သီးခေါငျးလေးကို စို့လိုကျနဲ့ လုပျနတေော့သညျ။ရကျလုပျစုပျလိုကျလုပျရငျးကနေ ထဘီပါခြှတျခပြဈလိုကျသညျ။လှလိုကျတဲ့ စောကျဖုတျကလေး ဖှေးပွီးဖောငျးနသေညျ။ အမှနေုလေးတှကေလညျး ရေးတေးတေးလေးရှိနသေညျ။
“ပလကျ…ပလကျ”စောကျဖုတျလေးကို အပီအပွငျယကျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာတော့ နနျးသူဇာတဈယောကျ အရညျလေးတှေ ထှကျလာခဲ့ရပွီ။သူမတို့အိပျစကျသော ကုတငျကွီးပျေါတှငျ ကိုကိုလှငျက နှူးနပျနသေဖွငျ့ နနျးသူဇာ ရငျဖိုနရေသညျ။နနျးသူဇာ တဈယောကျ ကိုကိုလှငျ့ကို တျောတျောလေးခဈြသှားခဲ့ရပွီ။ဖငျဝလေးကလညျး ပနျးရောငျသနျးပွီး လှပလိနျးတဲ့အတှကျ ကိုကိုလှငျက လြှာလေးခြှနျပွီး ထိုးကလိလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာတော့ နနျးသူဇာ ဖငျလေးပါမွောကျတကျပွီး ပွီးသှားရသညျ။။
နနျးသူဇာရဲ့ ခွခြေောငျးလေးတှဆေီ မကျြလုံးကရောကျသှားတော့ ကိုကိုလှငျစိတျပူးပွောငျးသှားသညျ။ လီးကို ပုဆိုးထဲကထုတျလိုကျပွီး နနျးသူဇာ၏ ဖွူဖှေးသှယျလှသော ခွခြေောငျးလေးတှကေို ဆုပျကိုငျပွီး သူ၏ လီးကွီးပျေါသို့ တငျပေးလိုကျသညျ။သူဌေးသမီးသူဌေးမယာလေးဆိုတော့ ခွဖေဝါးလေးရဲ့ အထိအတှကေ့ နူးညံ့ လှနျးသညျ။ လီးကွီးကလညျးအရမျးတောငျသှားသညျ။ “နနျး”“အဲဒီတိုငျးကွီးငွိမျမနနေဲ့လေ” “ဒီတိုငျးငွိမျမနလေို့ ဘာလုပျရမှာလညျး”နနျးသူဇာ”သူ့ကို ပွနျမေးမိသညျ။သူတောငျ သူမကို ကောငျးအောငျလုပျပေးတော့။ သူမလညျး သူ့ကို ပွနျပွီးကောငျးအောငျလုပျပေးခငျြ မိသညျ။ကို့ရဲ့ လီးကို နနျးရဲ့ ခွဖေဝါးလေးနဲ့ အထကျအောကျပှတျပေး။နနျးသူဇာ မိမိရဲ့ခွဖေဝါးဖွငျ့ အထကျအောကျစပွီးပှတျပေးလိုကျတော့ ကိုကိုလှငျ့ လီးကွီးမှာ နူးညံ့သော အထိအတှမြေ့ားကွောငျ့ အလှနျပငျမာကွောပွီး တဆကျဆကျတောငျလာသညျ။
“အား…”“ကောငျးလိုကျတာ နနျး ရယျ”“နနျး ရဲ့ ခွဖေဝါးလေးကို လိုးရတာ ကောငျးလိုကျတာကှာ”“အို”သူမရဲ့ ခွဖေဝါးလေးကို သူက လိုးရတာကောငျးတယျဆိုပါလား။နနျးသူဇာ လညျး ဖိပွီးပှတျပေးနလေသေညျ။ခဏကွာတော့ ကိုကိုလှငျက နနျးသူဇာကို ဆှဲထူပွီး နီစှေးပွီး ပါးလသြော နှုတျခမျးနှဈလှာနားမှာ လီးထိပျကို ဖွဲပွီး တပေ့ေးလိုကျသညျ။“ဘာလုပျမလို့လဲ”“အု…အု…”ဟလာသော နှုတျခမျးလေးထဲသို့ ကိုကိုလှငျခကျြခွငျးပဲ လီးကို ထိုးထညျ့လိုကျသညျ။နနျး ရယျ ကို့ကို စုပျပေးနျော။ စုပျပေးပါနျော။နနျးသူဇာ တဈခါမှ မစုပျဘူးသဖွငျ့ ဘယျလိုလုပျရမှနျးမသိပေ။သူ့ရဲ့ လီးကလညျး ပါးစပျထဲမှာ ပွညျ့နသေညျ။ မာလိုကျတာကလညျး အသားခြောငျးကွီးလိုပဲ။ နနျး ရဲ့ နှုတျခမျးလေးနဲ့ ရှနေ့ောကျ ဖိပွီးစုပျ။ နောကျပွီး လြှာလေးနဲ့ ကို့အတနျကို ကလိ။
“ပွှတျ…ပွှတျ…ပွှတျ…”နနျးသူဇာ သူခိုငျးတဲ့အတိုငျး တပွှတျပွှတျနအေောငျ ပွနျစုပျပေးမိသညျ။ပါးစပျထဲမှာ သူ့ကွီးက တဆကျဆကျနဲ့ ဖွဈနအေောငျကို စုပျပေးနမေိတာပေါ့။သူကတော့ နနျးခေါငျးလေးကို ကိုငျပွီး ရှတေို့းနောကျဆုတျနဲ့ နနျးပါးစပျလေးကို လုပျနတေယျထငျတာပဲ။“ပွှတျ…ပွှတျ…”သူမရဲ့ စောကျပတျလေးကို မရှံ့မရှာနဲ့ ယကျပေးသလို သူမလညျးသူ့ကို ပွနျပွီးစုပျပေးနမေိသညျ။မစုပျတတျစုပျတတျ စုပျပေးနတေဲ့ နနျးသူဇာရဲ့ နုနယျသောမကျြနှာလေးကို ကွညျ့ပွီး ကိုကိုလှငျ ဖီးတကျနသေညျ။
“အား…”“နနျး…ရယျ”“အခဈြရယျ”“အရမျး ကောငျးတယျကှာဘလှတျ”ကိုကိုလှငျ ပွီးခငျြလာသဖွငျ့ နနျးသူဇာ ပါးစပျထဲကနေ လီးကိုအပွငျထုတျလိုကျသညျ။နနျးသူဇာ ခဗြာ ပါးစပျလေးဟပွီးကနျြနခေဲ့သညျ။“နနျး”“ကို့ကို ကုနျးပေးပါ့လား”ခဈြမိသှားပွီဆိုတော့လညျး နနျးသူဇာ ဘာမှမပွောတော့ပဲ သူ့စိတျကွိုကျ ကုနျးပေးလိုကျသညျ။သူ့ရှမှေ့ာ ကိုယျလုံးတညျးလေးနဲ့ ကုနျးပေးထားတော့ ရှကျတာပေါ့။နနျးသူဇာရဲ့ အိုးကတော့ လုံးပွီးတငျးနသေညျ။“နနျး”ခါးကို နညျးနညျးလေးနှိမျ့ပွီး ဖငျကိုကော့ပေးထား။
နနျးသူဇာရဲ့ နောကျကနေ စိတျကွိုကျအနထေားဖွဈအောငျ ကိုကိုလှငျ ခိုငျးလိုကျသညျ။စကုနျးလိုကျတညျးက ပနျးရောငျသနျးနသေော ဖငျဝလေးကို ကိုကိုလှငျမွငျလိုကျရသောကွောငျ့ ဖငျလိုးဖို့အကောငျးဆုံးအနအေထားရောကျအောငျ ခိုငျးလိုကျခွငိးဖွဈသညျ။ပထမကတော့စောကျဖုတျလေးကို လိုးမလို့ပါ။ နနျးသူဇာရဲ့ အပြိုစငျဘဝကို ဦးမျောကွီးက ဒီကုတငျမှယေ့ာပျေါမှာ ယူခဲ့မှာပဲဆြုတာတှေးပွီး သူလညျး နနျးသူဇာရဲ့ ဖငျအပြိုရညျလေးကို ဒီကုတငျမှယေ့ာပျေါမှာ ယူခငျြတာကွောငျ့ စိတျကူးပွောငျးသှားခွငျးဖွဈသညျ။စိတျကွိုကျအနထေားရောကျနပွေီဖွဈသော နနျးသူဇာကို နောကျကနပွေီး လကျတဈဖကျက စောကျဖုတျလေးကိုပှတျပေး ဖငျဝလေးကို ရှာဖြားလေးနဲ့ ထပျပွီး သတှေးစှတျလိုကျသညျ။
ဖငျဝလေးကိုထပျပွီး အယကျခံလိုကျရသဖွငျ့ နနျးသူဇာ ဖငျလေးတှတေုနျခါသှားအောငျ လူးလှနျးသှားသညျ။ ဖငျဝလေးမှာ သတှေးလေးတှနေဲ့ စိုနပွေီး ဖငျအဆီလေးတှလေညျး ထှကျလာတော့ လီးဒဈကိုဖွဲလိုကျပွီး ဖငျထဲကို ဒဈမွုပျအောငျ ထိုးထညျ့လိုကျတော့သညျ။ဗဈြ”“အား…အမလေး…”“ကိုကိုလှငျ…အား…အပေါကျမှားနတေယျ…”“အမလေး…ဖငျကှဲသှားပွီလားမသိဘူး”ဖငျထဲ ဒဈမွုပျသှားမှတော့ ကိုကိုလှငျ ထုတျမပေးပဲ နညျးနညျးခငျြး ဖိလိုးပွီး ထိုးထညျ့သညျ။ ရုနျးထှကျဖို့ကွိုးစားနသေော နနျးသူဇာရဲ့ ခါးသေးသေးလေးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့စုံကိုငျပွီး ထိနျးထားသေးသညျ။
“မရဘူး နာတယျ”“အဲဒီအပေါကျကို မလုပျပါနဲ့တော့”“ဟို ဟာကိုပဲလုပျပါ”“အီး…ဟီး…ဟီး…”နနျးသူဇာ နာလှနျးစပျလှနျးသဖွငျ့ ငိုပွီးပွောလတေော့သညျ။ လီးကလဲ ဖငျဝထဲမှာ ပွညျ့ကွပျနသေညျ။ဒဈ…ဒဈ…ဗဈြ…ဗဈြ„”ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံး လှုပျရှားအောငျငိုနသေဖွငျ့ လီးကို ဖငျထဲသို့ပိုဝငျအောငျ နှဲ့သှငျးသလို ဖွဈနသေညျ။ကိုကိုလှငျလညျး အားမလိုအားမရပိုဖွဈမလာပွီး လီးကို အဆုံးထိရောကျအောငျ ခါးကိုကိုငျထားသော လကျကိုအားစိုကျပွီး ဖိသှငျးလိုကျတော့သညျ။
“ဖွဈ…ဗဈြ…”ပနျးရောငျသနျးနသေော ဖငျဝလေးပါ ခြိုငျ့ဝငျသှားသညျ။ နနျးသူဇာလေးကတော့ အဆကျမပွတျငိုနရေတော့သညျ။ဗဈြ…ဒုတျ…”“ဗဈြ…ဒုတျ”“နနျး ရဲ့ စောကျပတျလေးကို ဦးမျောက ဒီမှယေ့ာပျေါမှာ ပထမဆုံးစလိုးသလို။ ကိုလညျး “နနျး”ရဲ့ ဖငျကို ဒီမှယေ့ာပျေါမှာ ပထမဆုံးဖွဈအောငျ လိုးခငျြလို့ပါ “နနျး”ရယျ။ပထမဆုံးဖွဈအောငျ လိုးခငျြလို့ပါ“နနျး”ရယျ…နျော…နျော”အဲဒီလိုပွောပွောပွီး နနျးသူဇာရဲ့ ဖငျသားလေးမြားတုနျခါသှားအောငျ ကိုကိုလှငျ ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးတော့သညျ။
လိုးခံနရေသညျ့ဖငျကလညျးနာတာလိုလိုကောငျးတာလိုလိုနဲ့ စောကျပတျလေးကတော့ယားပွီးစောကျစိလေးကတော့အပွတျကိုတဆကျဆကျနဲ့တောငျနသေညျပွီးခါနညျးနပွေီကိုကိုလှငျကတော့သူမ၏ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံး နရောမကနျြအောငျလုပျတတျသညျ့ သူပါလားလို့ တှေးမိပွနျသညျ။ကွပျထုပျနသေောဖငျဝလေးရဲ့ညှဈနတေဲ့ ဒဏျကို ကိုလှငျလှငျတဈယောကျကောငျးကောငျးကွီးခံစားနရေသလိုဖငျကိုလိုးတာပထမဆုံးခံပွီးတဖွညျးဖွညျးနဲ့အရသာတှတှေ့လေ့ာတဲ့ နနျးသူဇာတို့ နှဈယောကျ ကာမပနျးတိုငျကို အတူတူတကျလှမျးဖို့ ကွိုးစားနကွေသညျ။
“အငျ့…”“အား…အီး…”“ဗဈြ…ဗှကျ…”ကိုကိုလှငျတဈယောကျ နနျးသူဇာရဲ့ ဖငျထဲသို့ သုတျရညျမြား ပွညျ့လြှံအောငျ ပနျးထညျ့လိုကျသလို နနျးသူဇာလညျး စောကျပတျလေးထဲမှ စောကျရညျလေးမြား ရှဲနအေောငျထှကျကသြှားသညျ။“ပလှတျ…”“ဗှကျ…”လီးထဲမှသုတျရညျမြား ဖငျထဲသို့ ကုနျစငျအောငျထညျ့ပွီးမှ စှဲထုတျလိုကျသညျ။ နနျးသူဇာရဲ့ ခါးလေးကို ကိုငျထားတဲ့ လကျနှဈဖကျကိုလှတျလိုကျရာ နနျးသူဇာလညျး ပြော့ခှသှေားပွီး မှယေ့ာပျေါသို့ ကသြှားသညျ။
“နနျး” “ကို့ ကိုခဈြလားဟငျ”“ပွောစရာလိုသေးလို့လား”“လူတဈကိုယျလုံး ခွဖေဝါးရော၊ဖငျရော ရှိတာတှအေကုနျလုံးနရောမကနျြလုပျပွီးတော့မှ”နနျး”ရဲ့ယောကျြားထကျကို့ကိုပိုမခဈြဘူးလား”“သူ့ထကျပိုခဈြလို့လညျး ရှငျလုပျသမြှတှကေို ခံနတောပေါ့။”“ကြှနျမရဲ့နှလုံးသားတှကေ ရှငျ့အပျေါမှာပဲ အကုနျလုံးပွောငျးသှားခဲ့ပါပွီ”။
အရပ်က ၅ ‘ ၇ “လောက်ရှိသည်။ ခါးသေးသေးကျဉ်ကျဉ်လေးကို ထိန်းထားသော အိုးလေးမှာလုံးပြီး တင်းနေတော့ ယောက်ျားတိုင်း နှစ်ခါမကပြန်ကြည့်ရောက်အောင်ကို တပ်မက်စရာပါ။ရှမ်းတရုတ်မလေးဆိုတော့ အသားအရေကလည်း ဖြူဝင်းပြီးစိုလဲ့နေသည်။နန်းသူဇာ”ဆိုတဲ့ နာမည်အတိုင်း နန်းစံပြီး ချောမောလှပသည်။သူမကို လိုက်သည့်ရွယ်တူကောင်လေးများကို စိတ်မဝင်စားပဲ “ဦးမော်”ကိုမှ ပြန်ချစ်မိသည်။
အချစ်ဆိုတာကလည်း ဆန်းကြယ်လှသည်။ “နန်းသူဇာ”ကိုတိုင်ကလည်း ပိုက်ဆံချမ်းသာသည်။တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးဆိုတော့မိဘများကလည်းအလိုလိုက်သည်။ “ဦးမော်”လို သူဌေးကြီးကို ယူလိုက်ခြင်းက ပစ္စည်း ဥစ္စာကြောင့်မဟုတ်ဘဲ တကယ်မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်လို့ယူကြတာလို့လည်း အားလုံးက နားလည်ထားသည်လေ။ကုမ္ပဏီက အလုပ်ကိစ္စတွေ ပြီးသွားတော့အိမ်ကိုပဲတန်းပြန်သည်။ကားတွေက အရမ်းရှုပ်နေတော့ အိမ်ပြန်ရောက်တာ နည်းနည်းနောက်ကျသွားသည်။
ကားကို ရပျထားပွီး အိမျထဲဝငျလိုကျတော့ ထုံစံအတိုငျးဇနီးခြောလေးက သံပရာဖြေျောရညျခှပျကလေးကိုငျပွီး စောငျ့နရှောသညျ။“ဦးမျော” ကုမ်ပဏီမှာ အလုပျကိစ်စတှမြေားနလေို့လား။ မဟုတျပါဘူး “နနျးသူဇာ”ရယျ။ လမျးမှာကားတှရှေုပျနလေို့ ပါ။“ဦမျော”ရဲ့ ဇနီးခြောလေး ဖြျောပေးတဲ့ သံပုရာဖြျောရညျသာကျလိုကျရငျ မပငျပနျးတော့ပါဘူး။ပေး..ပေး…“ဦးမျော”အရမျးသောကျခငျြနပွေီ။“နနျးသူဇာ”လှပသောမကျြစောငျးလေးခြီလိုကျပွီး…သှားအပိုတှလောပွောနတေယျ…ရော့…အမောပွသှေားအောငျသောကျလိုကျတော့။
ဒီလောက် အလိုက်သိပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇနီးချောကို ဦးမော် အလွန်ပင်မြတ်နိုးလှသည်။လုပ်ရင်လဲ အဝတ်အစားတောင်မချွတ်ပေ။ ထဘီလေးလှန်ပြီး အသာအယာပဲလုပ်သည်။နို့လေးတွေကိုကိုင်ရင်လည်း င်္အင်္ကျီပေါ်ကပဲ ဖွဖွလေးကိုင်သည်။ယူထားတဲ့ သုံးလအတွင်းမှာ “ဦးမော်”တစ်ယောက် သူ့ဇနီးချောလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးတီးအလှအပများကိုမမြင်ဘူးပေ။အိစက်ညက်ညောတဲ့မွေ့ယာပေါ်မှာ ညင်ညင်သာသာလေးတွေဖြင့်ပဲ ချစ်ဗျူဟာခင်းကြလေသည်။ဒါကြောင့်မို့လည်း “နန်းသူဇာ”က အပျိုလေးတစ်ယောက်လိုပဲ လှပစွာရှိနေသည်။
အား”…အရမ်းနာတာပဲ…“သူဌေးဦးကျော်ငြိမ်း”ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေး “လွင်မီ့”ကို “ကိုကိုလွင်”ဆိုသူက ကဖြုတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။“ကိုကိုလွင်”ဆိုတာကလည်း အခြားသူမဟုတ်ပေ။“သူဌေးဦးကျော်ငြိမ်း”၏ အားကိုးရသော လူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ပါးနပ်လွန်းသော “ကိုကိုလွင်”ကြောင့်သာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံး ရပ်တည်နေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။“ကိုကိုလွင်”ကလည်းအသားညိုပြီး အရပ်အမောင်းကောင်းကာ ယောက်ျားပီသသည်။ဆော်တွေကလည်း တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ပေါသည်။
သူ့ရဲ့ လီးကလည်း လက်သုံးလုံးလောက်တုတ်ပြီး အရှည်က၇”မလောက်ရှိသည်။ “လွင်မီ”အော်ရတာလည်း မပြောနှင့် လီးကိုဂေါ်သုံးလုံး တတ်ထားတာ နှစ်ပတ်လောက်ရှိသေးသည်။“လွင်မီ့” အပျိုနုနုထွတ်ထွတ် စောက်ပတ်လေးက ဂေါ်သုံးလုံးရဲ့ဒဏ်ကိုကောင်းကောင်းကြီး ခံစားနေရသည်။ဘလွတ်ဘတ်အားကိုကိုလွင်”၏ ဂေါ်တတ်ထားသောလီးညိုကြီးက ဖွေးသန့်နေတဲ့ စောက်ပတ် အသစ်စက်စက်လေးထဲကို ဝင်ထွက်နေသလို ဘောကလည်း “ လွင်မီ့” ရဲ့ ဖင်ဝလေးမှာ “တဘက်ဘက်”နဲ့ရိုက်ခက်လို့နေသည်။
လွင်မီလေး” …“ကို” လုပ်တာကို ခံလို့ကောင်းလား။ကောင်းမကောင်းတော့ မသိဘူး ဟိုထဲကအရမ်းနာတယ်။ဘယ်ထဲကလည်းလွင်မီလေး”ရဲ့။ ချစ်စဖွယ် မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး “စောက်ပတ်ထဲကနာနေတာ”ကဲ ကျေနပ်ပြီလား။“ကိုကိုလွင်”နဲ့ ကျမှပဲ သူမရဲ့နှုတ်မှ တစ်ခါမှ မပြောဘူးတာတွေ ပြောနေရသည်။ “ကိုကိုလွင်” ရဲ့ လီးကြီးက သူမရဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲမှာ ပြည့်ကြပ်နေသည်။ လီးကြီး၏ ဘေးမှဖုဖုထစ်ထစ်ကလေးများ သူမရဲ့ အစိလေးကို လာပြီးထိလိုက်တိုင်း သူမအဖို့တော့ တစ်ကိုယ်လုံးရှိန်းဖိန်းလို့နေသည်အား…ကောင်းလိုက်တာ လွင်မီလေးရယ်”ဂေါ်တက်ထားတဲ့ “ကိုကိုလွင်” လည်း အပျိုစောက်ပတ်လေးရဲ့တင်းကြပ်တဲ့ အတွေ့အထိအောက်မှာ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ပဲ လရည်များ လွင်မီ့ စောက်ပတ်လေးထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။
လွင်မီ ရော့ ကို့လီးကို ကိုင်ကြည့်လေ ဆိုပြီး လွင်မီ့ ရဲ့ လက်ကလေးကို ယူပြီး ကိုကိုလွင်က သူ့၏ လီးပေါ်သို့ တင်ပေးလိုက်သည်။လွင်မီလည်း အခုမှပင် မိမိရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို -ိုးသွားသော လီးကြီးကို ကိုင်မိလိုက်သည်။ ဟော…အခုလည်း လက်ထဲမှာ လီးကြီးက သူမ လက်နှင့်ပင် မဆန့် ၊ ဖုဖုထစ်နဲ့ စမ်းမိလို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ လီးရဲ့ အရေပြားထဲမှ ဖုထနေတာလေးတွေကို မြင်လိုက်ရသည်။“ကို”ဒါတွေက ဘာဖြစ်ထားတာလည်းဟင်၊ အနာတွေပေါက် နေလို့လား။အနာတွေမဟုတ်ပါဘူး လွင်မီလေးရဲ့လွင်မီ့ကို အာရပါးရ ချစ်ချင်လို့ တတ်ထားတဲ့ အလုံးလေးတွေလေ။
ဂျေါလီလို့ ချေါတယျ လှငျမီလေးရဲ့ ဆိုပွီး ပွနျတောငျလာတဲ့လီးကွီးကိုလှငျမီ့ရဲ့စောကျပတျကလေးထဲကိုထညျ့သှငျးလိုကျသညျ။ဒုတိယတဈခါထပျလုပျတော့ လှငျမီ လဲ ဂေျေါလီရဲ့ကောငျးကွောငျးကို သိသှားရပွီလေ။ လှငျမီ လညျးဒီတဈခါမှာတော့ ၃ခါလောကျပွီးသှားသညျ။ကိုကိုလှငျ့ လီးခြောငျးတဈခုလုံးလဲ လှငျမီ့ရဲ့ အရညျတှနေဲ့ စိုလတျနတောပေါ့။ ကိုကိုလှငျလညျး လှငျမီလေးခြီမွောကျပွီးတဲ့ အခြိနျနဲ့ ကှပျတိဖွဈအောငျစောငျ့ပွီး သုတျရညျမြားကို လှငျမီ့အဖုတျလေးထဲသို့ ထညျ့လိုကျတော့သညျ။
“တူတူတူ…တူတူတူ”ဘယ်သူဆက်တာလည်းလို့ကြည့်လိုက်တော့ သူဌေးဦးကျော်ငြိမ်းမှဖြစ်နေသည်။ဘာအကြောင်းကိစ္စရှိလို့များ ဟမ်းဖုန်းကို ခေါ်တာမသိ။အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာ ဖြစ်ဖို့များသည်။ကိုကိုလွင် ဖုန်းကိုင်လိုက်ပြီး လှမ်းမေးလိုက်သည်။ဆရာ ဘာအရေးကြီးကိစ္စများရှိလို့လဲ။အေး ရှိတယ် ကိုကိုလွင်။ ငါတို့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီက သူဌေးဦးမော်ကြီး မိန်းမယူထားတာ မကြာသေးဘူး။အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလည်းဆရာ။အေးဘာလုပ်ရမလည်းဆိုတော့ငါပြောပြမယ်။သူ့ကိုနိုင်ဖို့ ငါတို့မှာ အချိန်ကောင်းရောက်လာပြီပေါ့ကွာ။
ဟား….ဟား…ဟား….”အစီအစဉ်က ဒီလိုရှိတယ်ကွာ…..မင်းလည်းကြည့်ပြီးလှုပ်ရှားလိုက်ပေါ့ကွာ……ဟား…ဟား….ဦးမော်ကြီး ကုမ္ပဏီက ဘယ်အချိန်ပြန်တယ်ဆိုတာရယ် အိမ်မှာ အိမ်သားတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလည်းဆိုတာရယ် စုံစမ်းထားတယ်။ဦးမော်ကြီးရဲ့ ဇနီးလေးကိုတော့ မမြင်ဘူးသေးပေ။ယောက်ျားကိုအရမ်းချစ်တဲ့သူကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီး ချင်းကပ်ရမလဲ ဆိုတာ တွေးရင်းနဲ့ အချိန်တွေပဲ ကုန်လာတယ်။“ကျွီ…”“အမေ့…”ကားဘရိတ်အုပ်သံနှင့်အတူ ကောင်မလေးတစ်ယောက် လမ်းဘေးသို့ လဲကျသွားလေသည်။ကားကတော့ တောက်လျှောက်မောင်းပြေးသွား သည်။ အဖြစ်အပျက်က မြန်ဆန်လွန်သဖြင့် ကိုကိုလွင်လည်း ကားနံပါတ်ကို မှတ်ထားဖို့ မေ့သွားသည်။ ဦးမော်ကြီးတို့ အိမ်ကိုလာစုံစမ်းရာမှ စာဗူးတောင်းသိုက်နှင့် တိုးနေသည်။ ကောင်မလေးလဲကျနေသောနေရာသို့သွားလိုက်သည်။ကောင်မလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ လဲကျသွားလို့ ပွန်းတဲ့ ဒဏ်ရာကလွဲပြီး ဘာမှ မရှိပါ။။
ကောင်မလေးကတော့လန့်သွားပြီး မေ့နေသည်။ညီမ….ညီမ…”အင်း”ပွေ့ထူပြီး ခေါ်လိုက်တော့မှ သတိပြန်လည် လာသည်။ညီမ”သတိရလာပြီလား။ကားနဲ့တော့မတိုက် မိပါဘူး။ “ညီမ” ဘေးကို လဲကျပြီး ပွန်းသွားတဲ့ ဒဏ်ရာလောက်ပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်။အား…”“ကျွတ်…ကျွတ်…”ကောင်မလေးက ရုတ်တရက်ထရပ်လိုက်တော့ ဘယ်နေရာနာသွားလည်း မသိဘူး ညည်းညူနေတယ်။“ရရဲ့လား ဘယ်နေရာ နာသွားတာလည်း”“ရပါတယ်”“ခြေဖမိုးကအကြောတင်သွားတာနဲ့ တူတယ်”“အိမ်ကဝေးသေးလား”“မဝေးတော့ပါဘူး။ရှေ့နားလေးဆိုရောက်ပြီ”“ကူညီလက်စနဲ့တော့ မထူးတော့ပါဘူး ကျွန်တော် အိမ်ထိလိုက်ပို့ပေးပါ့မယ်”ကိုကိုလွင် ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းအိုးလေးကို ကိုင်ပြီးကောင်မလေးရဲ့ အိမ်သို့ လိုက်ပို့သည်။
ကောင်မလေးရဲ့ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ကိုကိုလွင် အတော်လေး အံ့သြသွားသည်။ ကောင်မလေးရဲ့ အိမ်မှာ သူအမြဲလာစုံစမ်းနေသော ဦးမော်ကြီးရဲ့ နေအိမ်ဖြစ်နေသည်။ ဒါဆို ဒီကောင်မလေးက ဦးမော်ကြီး၏ အလွန်ချစ်မြတ်နိုးလှစွာသော ဇနီးလေးနန်းသူဇာများ ဖြစ်နေမလား။“အဒေါ်ကြီး ဒေါ်မိုး” လာတွဲပါဦး။ဟုတ်လာပါပြီ မမလေးဆိုပြီး အသက်ငါးဆယ့်ငါးနှစ်ခန့်ရှိမည့် ဒေါ်မိုးဆိုသူ မိန်းမကြီးကားဂိုဒေါင်ထဲမှ ထွက်လာပြီး ကောင်မလေးကို လာတွဲကာ ခမ်းနားလှပသောအိမ်ကြီးထဲသို့ ခေါ်သွားသည်။ဒီကောင်မလေးသည် နန်းသူဇာဆိုတာ ပိုပြီးသေချာသွားသည်။
အခုမှကောင်မလေးကို သေသေချာကြည့်မိသည်။တော်တော်လေးကို ချောသည်။အရွယ်အားဖြင့်လည်း နုနယ်သည်။ နန်းသူဇာရဲ့ အလှအပကို ကြည့်ရင်းက ပိုပိုနှမြောလာသည်။အဒေါ်ကြီး ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးနဲ့ ပတ်တီးလေး ယူပေးပါ့လား။ ကျွန်တော် ဆေးလိမ်းပြီး ပတ်တီးပါစည်းပေးသွားမယ်။“အို…မဟုတ်တာ…နေပါစေ…ရပါတယ်”နောက်ပြီးကျမှ ကျွန်မဘာသာ လုပ်လိုက်ပါ့မယ်။ဆေးတွေသွားယူနေသောအဒေါ်ကြီးရောက်လာသည်။ရပါတယ်ဗျာ။ အားမနာပါနဲ့။“ပေး…ပေး…အဒေါ်ကြီး”ဆိုပြီး ကိုကိုလွင်က သွက်လက်စွာယူပြီးနန်းသူဇာ ထိုင်နေသောနေရာသို့ သွားလိုက်သည်။
စီးကွင့်ထိုးထားသော အဝါရောင် ကတ္တီပါဖိနပ်အပါးလေးကို ညှပ်စီးထားသော နန်းသူဇာ၏ ခြေချောင်းလေးများမှာ ဖြူဖွေးပြီး သွယ်လျလျလေးဆိုတော့ ဖွဖွလေးကိုက်ချင်စရာကောင်းလှသည်။နန်းသူဇာစီးထားသော ဖိနပ်လေးကို ကိုကိုလွင်က ချွတ်ပေးပြီး ခြေဖမိုးကို ဆေးလိမ်းဖို့ ပြင်လိုက်စဉ်-“အို…ရပါတယ်…ကျွန်မဖာသာ…”နန်းသူဇာရဲ့ စကားမဆုံးခင်မှာပဲ ကိုကိုလွင်က ဖိနပ်လေးကို ချွတ်ပြီးသွားသည်။“အို…အားနာလိုက်တာရှင်”“ရပါတယ်…ကိစ္စမရှိပါဘူး”ဒဏ်ရာသက်သာဖို့ကအဓိကပဲလေ”ပြောပြီး ခြေဖမိုးလေးကို ဆေးလိမ်းပေးနေသော ကိုကိုလွင့်ကို ကြည့်ပြီး နန်းသူဇာတစ်ယောက် အားနာတာရော စိတ်လှုပ်ရှားတွေရောဖြစ်နေသည်။
ကြိုက်တယ်ဆို လက်မလေးထောင်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။အတန်းတက်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေလို့ပါ။နန်းသူဇာ စိတ်လှုပ်ရှားနေစဉ် အတွင်းမှာပဲ ကိုကိုလွင်တစ်ယောက် သူမရဲ့ ခြေဖမိုးလေးကို ဆေးလိမ်းပြီး ပတ်တီးတောင် စည်းပေးပြီးသွားပြီ။ ကိုကိုလွင်လည်း ပြီးသွားသည်နှင့် -”ကျွန်တော့်ကို ပြန်ခွင့်ပြုပါအုန်း”နန်းသူဇာလည်း အခုမှသတိရကာ-“အစ်ကို့ နာမည်က”“ကျွန်တော့်နာမည်က ကိုကိုလွင်ပါ”“ကျွန်မနာမည်က နန်းသူဇာပါ။”နောက်လမ်းကြုံရင်လည်း အိမ်ကိုလာလည်လို့ရပါတယ်။ လမ်းကြုံမှာလည်းမဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဒီဘက်ကို ရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဝင်ခဲ့ပါ့မယ်သွားလိုက်ပါအုန်းမယ်”…ကိုကိုလွင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောပြီး အိမ်ထဲမှထွက်လာခဲ့သည်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီး ဦးမော်ကြီးတို့ အိမ်ဘက်မရောက်တော့တာ တစ်လခွဲလောက်ရှိသွားပြီ။ နန်းသူဇာရဲ့ မျက်နှာလေးကို မြင်ယောင်မိတိုင်း လွင်မီ့ကိုပဲ ခေါ်ပြီးလိုးဖြစ်နေတယ်။ ရည်းစားသက်တမ်းလေးကြာလာတာနဲ့ အမျှ လွင်မီလေးလည်း လီးကိုကောင်းကောင်းစုတ်တတ်ပြီး အောက်ပေးလည်းကောင်းလာတယ်။ လွင်မီ့ဖင်ကိုတော့ တစ်ခါမှမလိုးဘူး သေးဘူး။ ကုမ္ပဏီကို မသွားပဲ အိမ်မှာပဲ ဇိမ်ယူရင်း စဉ်းစားနေမိတယ်။“ဒေါက်…ဒေါက်”အခန်းတံခါးခေါက်သံကြားလို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ လွင်မီ ဖြစ်နေတယ်။ကုမ္ပဏီကို မသွားပဲ ဒီအခန်းထဲမှာ ငြိမ့်နေတယ်ပေါ့။“သွားစို့” အပြင်သွားပြီးမုန့်စားရအောင်။“နေပါဦး ချစ်လေးရယ်”ပြောကာ လွင်မီ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ပွေ့ချီပြီး မွေ့ယာပေါ် တင်လိုက်သည်။
“ပြွတ်…ပြွတ်…”မွေ့ယာပေါ်မှာ ထိုင်နေသော လွင်မီ့ကို ကိုကိုလွင် က နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းလိုက်ပြီး…“အင့်… ကို့ ရဲ့ လီးကို စုတ်ပေးအုန်း”ပြောကာ မတ်တတ်ရပ်ရင်းကနေ လွင်မီ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဝဆီသို့ လီးကိုတေ့ပေးလိုက်သည်။လွင်မီ ကလည်း ကိုကိုလွင်လုပ်သမျှဆို မငြင်းပေ။ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဟလိုက်ပြီး ပါစပ်ထဲ တိုးဝင်လာတဲ့ လီးကို လီးထိပ်လေးစုတ်လိုက် လီးတန်ကိုလျှာနဲ့ပတ်ဆွဲလိုက် ဂွေးဥလေးကိုလျှာနဲ့ထိုးလိုက် လုပ်ကာ အစွမ်းကုန် စုတ်ပြနေသည်။
“အား…ကျွတ်…ကျွတ်…”“ကောင်းလိုက်တာ လွင်မီလေးရယ်… တော်လိုက်တာကွာ”ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာအောင်စုတ်ခိုင်းပြီးမှ ကိုကိုလွင်က လွင်မီ့ကို မွေ့ယာပေါ်မှ ဆင်းခိုင်းပြီး လေးဘက်ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။နောက်သို့ ပြူထွက်လာသော စောက်ဖုတ်လေးက ဂေါ်တိုက်စားမှုကြောင့် နည်းနည်းကွဲနေသည်။ ဖင်ဝလေးကတော့ ပန်းရောင်သန်းပြီး ခပ်စူစူလေးဆိုတော့ ကိုကိုလွင်ကို ဆွဲဆောင်နေသယောင်။ကုန်းပေးထားတဲ့ လွင်မီရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို ကိုကိုလွင် အရင်လိုးလိုက်သည်။ လက်ကို သတွေးစွတ်ကာ ဖင်ဝလေးကိုပါ ကလိပေးနေသဖြင့် လွင်မီ ခဗျာ ညည်းသံလေးတွေဖြင့်ရှိနေသည်အား…ကို…ကိုရယ်”“ဘယ်လိုလုပ်နေတာလည်း…ဖင်ဝက ယားနေပြီ”“ယားနေရင် ကို လုပ်ပေးမှာပေါ့ လွင်မီလေးရဲ့”စောက်ပတ်ထဲကနေ လီးကို“ ဗွက်”ကနဲ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ဖင်ဝကို တေ့လိုက်သည်။“ကို” ဘာလုပ်မလို့ လဲ။
ဖင်ဝကို လီးဖြင့်တေ့ထားသဖြင့်လွင်မီလန့်ပြီး မေးလိုက်သည်။ လွင်မီ့ကို ချစ်မလို့ပေါ့ပြောပြီး စောက်ရည်လေးများနဲ့ စိုလက်နေတဲ့ လီးကို လက်ဖြင့်ထိန်းပြီး ဖင်ဝလေးထဲသို့ “ဗြစ်”ကနဲနေအောင် လီးထိပ်တစ်ခုလုံး မြုပ်သည် အထိဖိသွင်းလိုက်သည်။“အား…မရဘူး… နာတယ်…”လွင်မီ ရုန်းပေမယ့် ကိုကိုလွင်က ခါးလေးကို လက်နှစ်ဘက်ဖြင့်ကိုင်ကာထိမ်းထားသဖြင့် ရုန်းလို့မရပေ။ မျက်ရည်လေးများပါ ကျပြီး ထွန့်ထွန့်လူးခံစားနေရသည်။ ကိုကိုလွင်ကတော့ ဖင်အပျိုရည်ပါ ဖျက်ခွင့်ရလိုက်၍ အရသာကအထွတ်အထိပ်ရောက်နေသည်။ထွန့်ထွန့်လူးအောင်ခံစာနေရသော လွင်မီ့ကို မညှာတာပဲ လီးကို ဖင်ထဲသို့ ဝင်သည်ထက်ဝင်အောင် နည်းနည်းချင်း နှဲ့သွင်းနေသည်။ လွင်မီကသာ နာလွန်းလို့ ငိုရှိုက်နေရတာ ဖင်ဝလေးကတော့ သဘာဝအဆီလေးတွေပါ ထွက်နေပြီ။
“ဗြွတ်…ဗွက်…”“ဘွတ်…ဘွတ်…”“ဗျစ်…ဗျစ်…”လီးမှာ တပ်ထားတဲ့ ဂေါ်လီများကလည်း ကိုကိုလွင့်ရဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်း လိုးနေတဲ့ အသွင်းအထုတ်တိုင်းမှာ ဖင်ဝလေးကို ယားအောင်လုပ်နေသဖြင့် လွင်မီလည်း အငိုရပ်ပြီး ဖင်လေးကို နောက်ပစ်ခါ ပစ်ခါဖြင့် ဖင်ကို ကောင်းကောင်းလေး ခံတတ်လာလေပြီ။လွင်မီ ဖင်လေးပေးတတ်တာနဲ့ ကိုကိုလွင်ရဲ့ လိုးဆောင့်ချက်တွေမြန်လာပြီး သုတ်ရည်များ လွင်မီ့ ဖင်ထဲသို့ ပြည့်လျှံအောင် ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်။လွင်မီလည်း ဘယ်နှစ်ချီ ပြီးလို့ ပြီးမှန်းတောင် မသိတော့ပေ။ မွှေ့ယာပေါ်သို့ မြော့ခွေကျသွားသည်။သူငယ်ချင်းများ ကြိုက်တယ်ဆိုလက်မလေးထောင်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ အတန်းတက်ဖို့ ကြိုးစားနေလို့ပါ။ကျေးဇူးပါ။
“နန်း”“ဘယ်သွားမလို့လဲ…ကားပေါ်တတ်လေ…လိုက်ပို့ပေးမယ်”ခေါ်သံကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အပျိုတုန်းက ရည်းစားစကား အတင်းလိုက်ပြောတဲ့ “နေဝင်း” ဆိုတဲ့သူဖြစ်နေသည်။ ပျင်းတာနဲ့ စာအုပ်ငှားထွက်လာမှ စိတ်ညစ်စရာနှင့် ကြုံနေသည်။ ပိုက်ဆံရှိပေမယ့်စကားပြောမိုက်ရိုင်းသော “နေဝင်း”ကို အရင်ကတည်း “နန်းသူဇာ” ကြည့်မရခဲ့ပါ။ ကြည့်မရပါဘူးဆိုမှ လူရှင်းတဲ့ လမ်းမှာ လာတွေ့နေသည်။“နေဝင်း”ကားထဲကနေအပြင် ထွက်လာတော့ သူမလည်း မတတ်သာတော့ပဲ လမ်းလျောက်ရာမှ ရပ်လိုက်ပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်ပြောလိုက်သည်။“စာအုပ်သွားငှားမလို့ပါ…ရှေ့နားဆိုရောက်တော့မှာ…မလိုက်တော့ပါဘူး” ဒီလိုပြန်ဖြေလိမ့်မယ်ဆိုတာကို “နေဝင်း”သိနှင့်ပြီးသား။ ဟိုတုန်းကတည်းက ငြင်းခဲ့တာ ခုချိန်ထိ။ ဒီကောင်မလေးကို သူအရမ်းပိုင်ချင်ခဲ့တာ။ အရမ်းလိုချင်ခဲ့တာ။ ဘယ်လိုမှ ကြိုးစားလို့ မရခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့ထက်အသက်အများကြီးကြီးတဲ့သူကို “နန်းသူဇာ” လက်ထပ်သွားသည်လေ။
“ဒါဆိုလည်း တစ်ခုခုသွားစားရအောင်လေစကားပြောရင်းပေါ့”“မစားတော့ပါဘူး… ပြောစရာရှိရင် ဒီမှာပဲပြောလေ”“နန်း” အိမ်ထောင်ကျသွားပြီးမှ ပိုလှလာတယ်နော်။ “ရှင်”ဘာစကားတွေ လာပြောနေတာလည်း။နန်းသူဇာ စိတ်တိုသွားသည်။အော် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ပိုလှလာလို့ ပိုလှလာတယ်ပြောတာလေ။ ဘာလဲ မပြောရဘူးလား။ မင်းအဖိုးကြီးက မင်းကို တော်တော်လေး ချစ်ပြထားလို့နဲ့ တူတယ် ဟား…ဟား…ဟား…ရှင် ယုတ်မာလှချည်လား နှမသားချင်း ကိုယ်ချင်းမစာပဲ ရှင်မို့ပြောထွက်တယ်။တော်ပြီရှင်နဲ့ ကျမ လုံးဝစကားပြောစရာမရှိတော့ဘူး။ “နန်းသူဇာ”ပြောပြီးလှည့်အထွက်မှာ “နေဝင်း”က လက်ကောက်ဝတ်ကို လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။စကားပြောမိုက်ရိုင်းတဲ့အပြငအသားပါထိလာသဖြင့် “နန်းသူဇာ” ငြိမ်မခံတော့ပေ။“ဖြန်း”ပါးကို ဖြတ်ရိုက်ပစ်လိုက်သည်။
ရုတ်တရတ်ဆိုတော့ “နေဝင်း”လည်းမကာမိလိုက်နိုင်တော့ ပါးကို ဖျင်းကနဲ နေအောင် နာသွားသည်။ စိတ်လည်းတော်တော်တိုသွားသည်။ လက်တစ်ဖက်က ကားတံခါးကို ဆွဲဖွင့်ပြီး ကျန်တစ်ဖက်နှင့် “နန်းသူဇာ”ကို ကားထဲဇွတ်ဆွဲသွင်းသည်။“လူယုတ်မာ…ခွေးကြီး…ငါ့လက်ကိုလွှတ်စမ်းဆိုပြီး ပြောပြီး “နန်းသူဇာ” ရုန်းသည်။ အားချင်းမမျှ၍ “ နန်းသူဇာ” တစ်ယောက် ကားတံခါးပေါက်နားသို့ ရောက်လာသည်။လူကလည်းရှင်းနေသဖြင့် နန်းသူဇာ”တစ်ယောက် ကူရာမဲ့ပြီး ကားပေါ်တင်ခံရဆော့မည့် အခြေအနေ ဖြစ်နေသည်။ထိုသို့ ဖြစ်နေစဉ် အချိန်အတွင်းမှာပဲ သူတို့ဖြစ်ပျက်နေရာ လမ်းမပေါ်သို့ လူတစ်ယောက် လမ်းလျောက်လာသည်ကို “နန်းသူဇာ” နောက်လှည့်ရုန်းချိန်တွင် မြင်တွေ့လိုက်သည်။
“ကူညီပါဦးရှင်…ကူညီပါဦး”“နေဝင်း”လည်း ပါးစပ်ကို လှမ်းပိတ်ဖို့ အချိန်မမှီတော့ပေ။ထိုသူသည် အနားသို့ ရောက်လာသည်။“ညီလေး”လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဒီလိုမျိုး ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်တာမကောင်းပါဘူးကွာ။ပြေပြေလည်လည် ဖြေရှင်းမှပေါ့။သူနဲ့ ကျွန်မ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှင်”ကျွန်မကို သက်သက်လိုက်နှောက်ယှက်နေတာပါ” ပြောပြီး လှည့်အကြည့်တွင် နှစ်ယောက်စလုံး မျက်နှာချင်းဆိုင်တော့ အံ့သြသွာသည်။“နန်းသူဇာ”“ကိုကိုလွင်”“မင်း ယုတ်မာလှချည်လား”“ခွပ်”“ကိုကိုလွင်” စိတ်တိုသွားပြီး “နေဝင်း”၏ မေးရိုးကို လက်သီးဖြင့် ပင့်ထိုးလိုက်သည်။ “နေဝင်း”လဲကျသွားသည်။ ပြန်အထတွင် အနီးရှိ အုပ်နီခဲကို ကောက်ကိုင်ပြီး “ကိုကိုလွင်၏ ဦးခေါင်းကို ရိုက်ထည့်လိုက်သည်။ရိုက်ပြီးတာနဲ့ ကားပေါ်တတ်ပြီး “နင်ဒီနေ့ ဖြစ်တာတွေကို အကုန်မှတ်ထား နန်းသူဇာ။ နင်တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒီကိစ္စအတွက် ငါ့ပြန်ပြီး လက်စာားချေမယ်”ပြောကာ ကားကို မောင်းထွက်သွားသည်။
“ကိုကိုလွင်”ရဲ့ခေါင်းမှာလည်း သွေးတွေတော်တော်လေး ထွက်လာသည်။ မိမိကြောင့် အခုလိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ “နန်းသူဇာ” ဆေးထည့်ပေးရန် “ကိုကိုလွင့်” ကို ခေါ်သွားသည်။စဉ်းစားရင်းနဲ့ ဖုန်းဖြင့်ရေးနေပါသဖြင့် သည်းခံပြီး ဖတ်ပေးပါလို့ သူငယ်ချင်းများကို တောင်းပန်ပါတယ်။ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။“ဒေါ်ကြီးမိုး”လာပါဦး ဒီမှာ ကျွန်မကြောင့် “ကိုကိုလွင်”ခေါင်းပေါက်သွားလို့ ဆေးထည့်ပေးမလို့။ဆေးတွေယူလာခဲ့ပါဦး။ဒေါ်ကြီးမိုးလည်း ဆေးတွေကို သယ်လာရင်း နန်းသူဇာကို မေးလိုက်သည်။မမလေးရယ် ဘယ်လိုများဖြစ်လာတာတုန်း။
ဒါကြောင့်မို့ မမလေးကို “ဒေါ်ကြီးမိုး” ပြောသားပဲ။“ဒေါ်ကြီးမိုး”ကိုယ်တိုင် စာအုပ်သွားငှားပေးမယ်လို့။အဲဒါတွေနောက်မှပြောပါ ဒေါ်ကြီးမိုး ရယ်။သူ့ကိုအရင်ဆေးထည့်ပေးရအောင်။“အား…”“ကျွတ်…ကျွတ်…”နန်းသူဇာက ဒဏ်ရာကိုအရက်ပြန်ဖြင့် ဆေးလိုက်တော့ ကိုကိုလွင် တစ်ယောက် စပ်သွားပြီး ညီးတွားလိုက်သည်။တော်တော်စပ်သွားတာလား ကိုကိုလွင်။နန်းသူဇာက အနီးကပ်လေးမေးလိုက်တာဆိုတော့ သင်းပျံ့သော ဂတွင်းနန့်လေးက ကိုကိုလွင့်ရဲ့ နှာခေါင်းဝလေးမှာ စွဲကျန်သွားသည်။အရာအားလုံးနဲ့ပြည်စုံနေပါလား နန်းသူဇာရယ်လို့ ကိုကိုလွင် တွေးဖြစ်သည်။တော်လေးစပ်သွားတာလား ကိုကိုလွင်။
ကိုကိုလွင်လည်း အခုမှ သတိဝင်သွားပြီး…“အင်း…”ခဏကြာတော့ ဆေးထည့်ပြီး ပတ်တီးပါ စည်းပေပြီးသွားသည်။“ကျွန်တော်သွားတော့မယ်”ပြောပြီး ထရပ်လိုက်ကာ ခေါင်းမူးသွားဟန်ဆောင်ပြီး ခေါင်းကို လက်ဖြင့်ဖိပြီး ခန္တာကိုယ်ကို ယိုင်ပြလိုက်သည်။နန်းသူဇာ စိုးရိမ်ပြီး လှမ်းထိမ်းလိုက်သည်။“ဒီမှာ ခဏနားပြီးတော့ သက်သာတော့မှ သွားပါလား”ရပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော့်အတွက် မပူပါနဲ့။ကိုကိုလွင် လီဆယ်ပြီး ပြောလိုက်သည်။“အို မဟုတ်တာရှင် ကျွန်မကြောင့် အခုလိုဖြစ်သွားတာပဲ”ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခန်းတစ်ခန်းမှာ နားလိုက်ပါ။
“ဒေါ်ကြီးမိုး”“ရှင်” မမလေးဒီက အစ်ကို့ကို ဒေါ်ကြီးမိုးရဲ့ အခန်းနဲ့ ကပ်ရပ်က တိုက်ခန်းလေးထဲမှာ အနားယူဖို့ ပြင်ပေးလိုက်ပါနော်။ကိုကိုလွင်တစ်ယောက် နန်းသူဇာအနားယူခိုင်းထားသောအခန်းထဲတွင်ကုတင်ပေါ်လှဲနေပြီးအကြံထုတ်နေသည်။ဒီအတိုင်းဆိုသူ့ဆရာ သူဌေးကြီးဦးကျော်ငြိမ်း ခိုင်းထားတဲ့အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်ကြီးမိုးအခန်းနဲ့ ကပ်ရပ်ဆိုပေမယ့် ပေက၂၀.၂၅လောက်ကွာသည်။ ဘာဆက်လုပ်ရမလည်း စဉ်းစားရင်းနဲ့ မျက်စိမှိတ်ကာ မှိန်းနေလေသည်။ဒေါ်ကြီးမိုး သူအခုဘယ်လိုနေသေးလည်း။ အခန်းထဲမှာ ဒဏ်ရာကြောင့် အိပ်ပျော်နေတယ်တဲ့တူတယ် မမလေး။ဒုက္ခပါပဲ ဦးမော်ပြန်လာလို့ သူ့တွေ့သွားရင် ကျွန်မဖြင့် ဘယ်လိုရှင်းပြရမလည်း မသိတော့ဘူး။ ကျွန်မကြောင့်ဖြစ်ထားတာဆိုတော့ ဒီအတိုင်းပြန်လွှတ်ဖို့လည်းမကောင်းဘူး။
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါဘူး ဒေါ်ကြီးမိုးရယ်။ဆရာကြီးကတော့ ဒေါ်မိုးတို့ ဘက်ကိုမလာတတ်တော့ မတွေ့လောက်ပါဘူး မမလေးရယ်။ တွေ့တော့လည်း ဒေါ်ကြီးမိုး ရှင်းပြပေးမှာပေါ့။ကျေးဇူးပါပဲဒေါ်ကြီးမိုးရယ်။ညကလည်းတေတော်နေပြီ။အကောင်းစားမွေ့ယာပေါ်မှာ အိပ်မပျော်နိုင်သူတစ်ယောက်ကတော့ နန်းသူဇာပင်။ဦးမော်ကြီးကတော့ သူမဘေးမှာ အိပ်စက်နေသည်။ အလုပ်ပန်လာလို့ ထင်သည် တခေါခေါနှင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်နေသည်။“ကိုကိုလွင် သက်ရောသက်သာရဲ့လားမသိဘူး။ ငါလည်း သူ့ကို အခန်းထဲ ပို့ထားပြီးမှ တစ်ခေါက်မှ မရောက်ဖြစ်ဘူး။ ဒဏ်ရာကြောင့်ဖျားများနေမလား။ ဒီအချိန်သွားကြည့်ရင်ကောင်းမလား။
“ဆိုပြီး စဉ်းစားနေသည်။ဒဏ်ရာကလည်းခေါင်းမှာဆိုတော့ တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးဆိုပြီး နောက်ဆုံးတော့ သွားကြည့်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်သည်။ကိုကိုလွင့်အခန်းထဲသို့ သူဌေးဦးမော်ကြီးရဲ့ ဇနီးလေး ရောက်ရှိလို့နေသည်။ကိုကိုလွင် အိပ်မပျော်သေးပေ။တံခါးဖွင့်သံ မကြားပေမယ့် ရှူမိလိုက်တဲ့ ကိုယ်သင်းနန့်လေးက နန်းသူဇာပဲဆိုတာ အတပ်သိလိုက်သည်။အသက်ရောရှိသေးရဲ့လားလို့ ကိုကိုလွင့် နှာခေါင်းဝကလေကို စမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ။ကိုကိုလွင့် လက်တစ်ဖက်က နန်းသူဇာရဲ့ စမ်းနေတဲ့ လက်ကိုဆွဲပြီး နန်းသူဇာရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုပါ ရင်ခွင်ထဲသွင်းလိုက်တယ်။“အို”နန်းသူဇာလည်း ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကိုကိုလွင့်ရဲ့ ရင်ခွင်ထက်မှာ အသံတိုးတိုးလေးထွက်ပြီးပါသွားတယ်။
မှိန်ဖျော့တဲ့ အလင်းရောင်ထဲမှာ နောက်ပြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့ညဆိုတော့ နန်းသူဇာ ရင်တုန်သွားသည်။ဘာလုပ်ရမှန်းလဲ မသိတော့။ ရုန်းလို့ကလဲမရပေ။သန်မာသောလက်များက မိမိ၏ ခါးသေးသေးကျဉ်ကျဉ်လေးကို အမိအရဖတ်ထားသည်။ သူမကို အဓမ္မလုပ်ဖို့ကြံနေတာလား စဉ်စားမိပြီး သူ့မျက်လုံးကို ကြည့်လိုက်တော့ မျက်စိမှိတ်ထားပြီးအိပ်ပျော်နေသည်။ နန်းသူဇာ လျောက်တွေရင်းနဲ့ ရင်ပါဖိုလာသည်။ သူ့ကို အခုမှသေချာကြည့်မိသည် အသားညိုပြီး မျက်နှာက ယောက်ျားပီသသည်။ အို… ဘာတွေလျောက်တွေးနေမိတာလည်း။နန်းသူဇာလျောက်တွေးနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ ကိုကိုလွင်က အဖျားတတ်တာလိုလိုနဲ့“ချစ်တယ် နန်းရယ်…အရမ်းချစ်တယ်ကွာဆိုပြီး” လက်တွေကလည်း ခါးကနေ ရင်နှစ်မွှာကိုပါ ကျူးကျော်နေသည်။
ဒီလိုအချိန်မျိုးလာမိတာကိုက မိမိအပြစ်မှန်း နန်းသူဇာသိသည်။ အော်လိုက်လျှင်လည်း မိမိခင်ပွန်းကနိုးလာပြီး မိမိကို ဘာတွေများပြောလိုက်မလဲ။ နန်းသူဇာ စိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်နေတဲ့ အချိန်လေူမှာပဲ ကိုကိုလွင်က သူမကို ရင်ခွင်ထဲကနေ ကုတင်ပေါ် လှဲလိုက်သည်။ကိုကိုလွင်ကလည်း သူ့ရင်ဘက်အောက်ရောက်နေသော နန်းသူဇာကို ငုံကြည့်ရာတွင် အခုမှ သတိရလာတဲ့ပုံဖြင့်။“နန်း…နန်းသူဇာ”ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အခုလို…”“မထူးတော့ပါဘူး နန်း ရယ်”“နန်း”ကို ကိုယ်ချစ်တယ်”တောင်စဉ်ရေမရလျောက်ပြောပြီး နန်းသူဇာရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ဇွတ်နမ်းလိုက်တယ်။
နန်းသူဇာ ဘာမှမပြောနိုင်တော့ပေ။ ငိုရှိုက်ရုံပဲ ရှိတော့သည်။ မိမိ၏ ယောက်ျားတစ်ယောက်သာ စပ်ယှက်ဘူးသော စောက်ဖုတ်လေးကို နောက်ထပ်တစ်ယောက်က ထပ်လုပ်အုန်းမည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသတီတော့။ကိုကိုလွင်ကတော့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို စုတ်ပြီးနောက် နန်းသူဇာရဲ့ ထဘီကို လှန်ကာ ဝင်းဖန့်သောစောက်ပက်လေးကို အပြတ် လျှာဖြင့် လျက်တော့သည်။နန်းသူဇာမှာ ဒီလို လုပ်မယ်မထင်ထားပေ။ သူမ၏ စောက်ပတ်လေးတစ်ခုလုံး ရိုးတိုးရွတတွေ ဖြစ်ကုန်သည်။ သူမ၏ ခင်ပွန်းနှင့် စပ်ယှက်တဲ့ အခါတိုင်း ရိုးရိုးတန်းတန်းသာ။အခုဟာက သိလည်းမသိပေ။ ပထမဆုံးကြုံဘူးခြင်းဖြစ်သည်။“တော်ပါတော့ ရှင် အဲဒီလို မလုပ်ပါနဲ့ မနေတတ်လို့ပါ”ကျွန်မ ကို သနားပါဦးရှင်”“ငရဲတွေလည်း ကြီးကုန်ပါပြီရှင်”ကိုကိုလွင်ကတော့ စောက်ပတ်လေးကို ကျကျနန ယက်ပေးနေသည်။
စောက်မွှေးလေးတွေကလည်းနုနုပါပါးလေးတွေဆိုတော့ ယက်ရတာ အရသာတွေ့နေသည်။နန်းသူဇာလည်း ငြင်းလို့သာငြင်းနေတာ။ ကိုကိုလွင့်ရဲ့ လျှာဖျားလေးက အစိလေးကို လာထိလိုက်တိုင်း မသိစိတ်က ဖင်လေးကို ကော့ပြီးပင့် ပင့် ပေးနေမိတာပါ။ နန်းသူဇာတစ်ယောက် ကိုကိုလွင့် ရဲ့ လျှာဖျားလေးမှာပဲ အရေလေးများထွက်သွားသည်အထိ ကျရှုံးသွားသည်။မလုပ်ပါနဲ့ ပြောရင်းက မိမိပြီးသွားသဖြင့် ကိုကိုလွင့်ကို မျက်နှာမပြရဲလောက်အောင် နန်းသူဇာ ရှက်သွားသည်။ ကိုကိုလွင်လည်း နန်သူဇာပြီးသွားသဖြင့် လျက်နေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး အကြောများအပြိုင်းပြိုင်းထနေသော ဂေါ်တပ်ထားသောလီးကြီးကို အရည်လေးများရွှဲစိုနေသော နန်းသူဇာ၏စောက်ပတ်နုနုလေးထဲသို့ ဖိသွင်းလိုက်သည်။
“ဗျစ်”“အား…နာတယ် မရဘူး နာတယ်”“ကွဲသွားပြီနဲ့ တူတယ်”နန်းသူဇာ၏စောက်ပတ်လေးကို လိုးရသည်မှာကောင်းလှသည်။ အပျိုတစ်ယောက်ကို လိုးရသလိုပဲ။ စီးကြပ်နေသည်။ တော်တော်လေးဖိသွင်းလိုက်မှ ဗျစ် ကနဲ အသံနှင့်အတူ စောက်ပတ်လေးရှုံ့ပြီး ဝင်သွားတာ။“ဗျစ်…ဘွတ်…ဖတ်…”ဝင်ထွက်သံတွေနှင့် ကိုက်ညီစွာ ဂေါ်လီများကလည်း နန်းသူဇာ၏ စောက်ပတ်နံရံနှင့် အစိလေးကို ပွတ်ဆွဲနေသည်။နန်းသူဇာတစ်ယောက် ဂေါ်တွေရဲ့ ပွတ်ဆွဲမှုဒဏ်ကို ကောင်းကြီးခံစားရင်း ခါးလေးကော့တက်သွားပြီး ဒုတိအချီမြောက်ပြီးသွားပြန်သည်။ ကိုကိုလွင့်ရဲ့ လိုးစောင့်ချက်များလည်းမြန်လာသည်။မြန်လာသည်နှင့်အမျှ နန်းသူဇာလည်း“အား…နာတယ်…နာတယ်….” ဟုတိုးညှင်းစွာ ညည်းနေသည်။
နန်းသူဇာ၏ ညည်းသံလေးကြောင့် ကိုကိုလွင့်မှာ အရသာတိုးနေသည်။“ဗွက်…ဖွတ်”“ဒုတ်…ဘွတ်”အသံတွေမျိုးစုံထွက်နေသည်။ကိုကိုလွင့်၏ လီးမှာ နန်းသူဇာ၏ စောက်ပတ်လေး ကျဉ်းကြပ်ပြီး ညှစ်တဲ့ဒဏ်ကို ကြာရှည်စွာ မခံစားနိုင်တော့သလို နန်းသူဇာလည်း ဂေါ်ဒဏ်ကို ကြာရှည်စွာ မခံစားနိုင်တော့ပဲနှစ်ယောက်သားကာမအထွတ်အထိပ်ကို ပြိုင်တူတက်လှမ်းသွားသည်။“အား…အင်း…” ညည်းညူရင်း နှစ်သားမောဟိုက်သွားလေသည်။နန်းသူဇာအဖို့ တစ်ရက်တည်းသုံးချီပြီးသွားတာက ပထမဆုံးဖြစ်ကာ နုံးချိသွားလေတော့သည်။ဒီကာမအရသာကိုလည်း ဘယ်တော့မှမေ့ပျောက်ရမှာ မဟုတ်ပေ။မိမိ၏ အဖြစ်အပျက်များကလည်း မျက်လှည့်ဆန်လှသည်။ ကြည့်ရုံလေးလာကြည့်တာကနေ ကိုကိုလွင့်ရဲ့ ချစ်ပွဲဆင်နွှဲခြင်း ခံလိုက်ရသည်။ လူလည်းတစ်ကိုယ်လုံးနုံးချိသွားသည်။
နန်းသူဇာ ပြန်ဖို့ထရပ်လိုက်စဉ်မှာပဲ ကိုကိုလွင် နန်းသူဇာရဲ့ ခါးကို ဖက်လိုက်သည်။“နန်း…နန်းရယ်…”“ကို့ကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့ကွာ”“ကို ချစ်လွန်းလို့ ဖြစ်သွားတာပါ”တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်မမှားတာပါ။ ဒီနေရာထိ လာမိတာကိုက ကျွန်မမှားတာ။ကျွန်မမှာယောက်ျားရှိတယ်ဆိုတာကို အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ ရှင့်ကို မပြောခဲ့တာ။“ဟင်! ““နန်း…နန်းမှာ ယောက်ျားရှိတယ်”“မယုံဘူးကွာ လုံးဝ မယုံဘူး”မျက်ရည်များပါ ကျလာသည်အထိ ကိုကိုလွင် သရုပ်ဆောင်ကောင်းလှသည်။ကျွန်မယောက်ျား မနိုးသေးခင် ကျွန်မသွားရမယ်။ ကျွန်မကို လွှတ်ပါရှင်။မရနန်း လုံးဝမလွှတ်နိုင်ဘူး။ နန်း ပြောတဲ့စကားတွေကို မယုံဘူး။ ကို့ကို ချစ်တယ်လို့ပြောမှ ကို လွှတ်ပေးမယ်။
နန်းသူဇာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့။ အခက်တွေ့နေပြီ၊။ အဖြေတောင်းနေတဲ့ သူကလည်း ခုနကမှ အချစ်ပွဲကို ဆင်နွဲထားတဲ့သူ။ သူမမှာလည်း သူမချစ်လို့ ယူထားတဲ့သူ။ ခေါင်းထဲမှာလည်း မူးနောက်နေအောင်ရှုပ်ရှက်ခက်နေသည်။ချစ်တယ်လို့ ပြန်မဖြေရင် နန်းကို ကိုလွှတ်မပေးတော့ဘူးနော်။မပြန်လို့ကလည်းမဖြစ်တော့ပေ။နန်းသူဇာနောက်ဆုံးတော့ “အင်း”လို့ပြောပြီး အိပ်ဘက်သို့ အပြေးလေးပြန်သွားသည်။ ကိုကိုလွင်ကတော့ အချောအလှလေးကိုလုပ်ခဲ့တာတွေပြန်တွေရင်း အပျော်ကြီးပျော်နေလေသည်။နန်းသူဇာလည်း မိမိယောက်ျားဘေးတွင် အိပ်ရင်း ကွဲသွားသောစောက်ဖုတ်လေးကို ကိုင်ပြီး ခုနကအဖြစ်ပျက်တွေကို ပြန်စဉ်းစားနေမိသည်။
“ကိုကိုလွင့်ရဲ့ လီးကြီး ကြီးသည်ကိုတော့ သူမအဖုတ်လေးထဲသို့ လီးဒစ်ကြီးတိုးဝင်လာတည်းက သိသည်။ သူမ မသိတာက သူမရဲ့ အစိထိပ်ကို ပွတ်ဆွဲနေသောအလုံးလေးတွေကို မသိပေ။ ထိုအုံးလေးများကြောင့် သူမ သုံးကြိမ်တောင်ပြီးသွားရသည်။ သူမကိုစပြီးမလုပ်ခင်က မရွံ့မရှာနဲ့ လျှက်ပေးတာကိုတွေးလိုက်မိတော့ စောက်ပတ်လေးမှာ အရည်လေးများထွက်လာပြန်သည်။ကိုကိုလွင်ရဲ့ လိုးဆောင့်ချက်တွေက သူမယောက်ျားနဲ့တော့ တခြားစီပါ။ သူမယောက်ျားကတော့သုံးရက်တစ်ခါလောက် လေးရက်တစ်ခါလောက်သာ သူမကိုလုပ်ဖြစ်သည်။ လုပ်ဖြစ်တိုင်းလည်း သူမမှာ အခုလိုမျိုး ပြီးတယ်ဆိုတာမကြုံဘူး။
ဒါကြောင့်မို့လည်း ကာမအရသာဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခဲ့ပါ။ ကိုကိုလွင်နဲ့တွေ့မှ ကာမအရသာကောင်းမှန်း သူမသိခဲ့ရသည်။ ကိုကိုလွင်ဆိုသော ကိုညိုချောကို ငါ့ယောက်ျားထက်များ ချစ်မိသွားပြီလား”ဆက်ပြီးမတွေးချင့်တော့ ဆက်တွေးလျှင် သူမ တကယ်ချစ်မိသွားတော့မည်။ဦးမော်ကြီးတော့ သူမပြင်ဆင်ထားသော မနက်စာစားပြီး ကုမ္ပဏီသို့ သွားပြီ။ ဦးမော်ကြီး ထွက်သွားတော့ ကိုကိုလွင့်ကို မနက်စာကြွေးရန် ဒေါ်ကြီးမိုးကိုမှာပြီး သူမတို့အခန်းသို့ ပြန်သွားသည်။“ကိုကိုလွင်”မေးလာလျှင်လည်း ခေါင်းကိုက်နေတယ်ပြောပေးဖို့ မှာထားခဲ့သည်။
ဒေါ်ကြီးမိုးတစ်ယောက် ကိုကိုလွင့်ကို သွားခေါ်လာပြီး မနက်စာအတွက် ကော်ဖီနဲ့ ကြက်ဥပေါင်မုန့်ကြော် ချပေးသည်။ “ဒေါ်ကြီး”“ဟိုလေ နန်းသူဇာက လာမစားဘူးလား“ခေါင်းကိုက်လို့တဲ့အခန်းထဲမှာနားနေတယ်ကွဲ့”ကျွန်တော် ဒါတွေမစားတတ်လို့ ဒေါ်ကြီး မစားတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် ပြန်တော့မယ် ။ ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ ပြောပေးပါ။အို ဒီလိုလည်းဘယ်ဟုတ်အုန်းမလဲ ငါ့တူရယ်။ တခုခုလေးစားပြီးမှသွားပေါ့။ဘာစားချင်လို့လဲ ဒေါ်ကြီး သွားဝယ်ပေးမယ်။မုန့်ဟင်းခါးလောက်ဆိုရပါတယ်။နေပါစေ ဒေါ်ကြီးရယ် ကျွန်တော်ပြန်ရင်းနဲ့ပဲ ဝင်သောက်လိုက်ပါမယ်။
အားမနာပါနဲ့ကွယ်။ ဒေါ်ကြီး လမ်းထိပ်ကဆိုင်မှာ သွားဝယ်လိုက်မယ် ဆိပြီး ထွက်သွားသည်။ကိုကိုလွင် အမှန်တကယ်တော့ ညစ်လိုက်ခြင်းသာ။ဒေါ်ကြီးမိုး ထွက်သွားသည်နှင့် နန်းသူဇာရှိတဲ့ အခန်းကို လိုက်ရှာနေသည်။ တခါးတစ်ချက် ခပ်ဟဟလေးပွင့်နေသော အခန်းကိုတွေ့တော့ အထဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ နန်းသူဇာ၏ ကျောပြင်ကို မြင်လိုက်သည်။ တစ်ခန်းလုံးကို ဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ အခန်းထဲ အလှဆင်ထားသော ပစ္စည်းများမှာ အကောင်းစားတွေကြည်း သုံးထားမှန်းသိသာသည်။ ကုတင်ကြီးနှင့် မွေ့ယာကလည်း ကြည့်လိုက်သည်နှင့် အိပ်ပစ်လိုက်ချင်စရာပါ။ နန်းသူဇာက တဖက်လှည့်အိပ်နေသဖြင့် ကိုကိုလွင်ဝင်လာသည်ကို မသိလိုက်ပါ။
မွေ့ယာက အိခနဲ ဖြစ်သွားသဖြင့် နန်းသူဇာ နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်။“ကိုကိုလွင်…ရှင် ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီအခန်းထဲဝင်လာတာလည်း”“ကို့ချစ်သူကို တွေ့ချင်လို့ လိုက်ရှာရင်းဝင်လာတာပေါ့”“ဘယ်သူကရှင့်ချစ်သူလို့ ပြောလို့လည်း”“နန်းပဲ မနေ့ညက ခေါင်းညိတ်ပြီး ပြန်သွားတာလေ”“ကျွန်မယောက်ျားနဲ့ ပြဿနာတတ်မှာစိုးလို့ ခေါင်းညိတ်ခဲ့တာ။”“ကျွန်မတောင်ပန်ပါတယ်ရှင် ရှင်ပြန်ပါတော့” နန်းသူဇာ နောက်ထပ်စကားတွေ ထပ်မပြောနိုင်အောင် နန်းသူရဲ့ နီစွေးနှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုကိုလွင် ငုံစုတ်လိုက်သည်။ နန်းသူရဲ့ လျာလေးကိုလည်း သူ့လျာနှင့် ပွတ်တိုက်လိုက်သည်။
နန်သူဇာ “အွန်း…အွန်း…”နှင့် ဖြစ်သွားသည်။ကိုကိုလွင့်ရဲ့ လက်တွေကလည်း နန်းသူဇာရဲ့ နို့လေးတွေကို အင်္ကျီပေါ်မှ ဆုပ်နယ်ပေးသည်။ နန်းသူဇာရဲ့ ရင်သားလေးတွေက တင်းရင်းပြီးကိုင်လို့ ကောင်းလှသည်။နို့လေးတွေကိုင်ရင်း အားမရတာနဲ့ အပေါ်င်္အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်သည်။ဝင်းမွတ်နေတဲ့ ရင်သားလေးနဲ့ ပန်းရောင်သန်းနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးကို မြင်လိုက်ရတော့ ကျုကျုလွင်မနေနိုင်တော့ပေ။“ပြွတ်…ပြွတ်…”“ပလက် … ပလက်…”ရင်သားတွေကိ ယက်လိုက် နို့သီးခေါင်းလေးကို စို့လိုက်နဲ့ လုပ်နေတော့သည်။ရက်လုပ်စုပ်လိုက်လုပ်ရင်းကနေ ထဘီပါချွတ်ချပစ်လိုက်သည်။လှလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ်ကလေး ဖွေးပြီးဖောင်းနေသည်။ အမွှေနုလေးတွေကလည်း ရေးတေးတေးလေးရှိနေသည်။
“ပလက်…ပလက်”စောက်ဖုတ်လေးကို အပီအပြင်ယက်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ နန်းသူဇာတစ်ယောက် အရည်လေးတွေ ထွက်လာခဲ့ရပြီ။သူမတို့အိပ်စက်သော ကုတင်ကြီးပေါ်တွင် ကိုကိုလွင်က နှူးနပ်နေသဖြင့် နန်းသူဇာ ရင်ဖိုနေရသည်။နန်းသူဇာ တစ်ယောက် ကိုကိုလွင့်ကို တော်တော်လေးချစ်သွားခဲ့ရပြီ။ဖင်ဝလေးကလည်း ပန်းရောင်သန်းပြီး လှပလိန်းတဲ့အတွက် ကိုကိုလွင်က လျှာလေးချွန်ပြီး ထိုးကလိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ နန်းသူဇာ ဖင်လေးပါမြောက်တက်ပြီး ပြီးသွားရသည်။။
နန်းသူဇာရဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေဆီ မျက်လုံးကရောက်သွားတော့ ကိုကိုလွင်စိတ်ပူးပြောင်းသွားသည်။ လီးကို ပုဆိုးထဲကထုတ်လိုက်ပြီး နန်းသူဇာ၏ ဖြူဖွေးသွယ်လှသော ခြေချောင်းလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး သူ၏ လီးကြီးပေါ်သို့ တင်ပေးလိုက်သည်။သူဌေးသမီးသူဌေးမယာလေးဆိုတော့ ခြေဖဝါးလေးရဲ့ အထိအတွေ့က နူးညံ့ လွန်းသည်။ လီးကြီးကလည်းအရမ်းတောင်သွားသည်။ “နန်း”“အဲဒီတိုင်းကြီးငြိမ်မနေနဲ့လေ” “ဒီတိုင်းငြိမ်မနေလို့ ဘာလုပ်ရမှာလည်း”နန်းသူဇာ”သူ့ကို ပြန်မေးမိသည်။သူတောင် သူမကို ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတော့။ သူမလည်း သူ့ကို ပြန်ပြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးချင် မိသည်။ကို့ရဲ့ လီးကို နန်းရဲ့ ခြေဖဝါးလေးနဲ့ အထက်အောက်ပွတ်ပေး။နန်းသူဇာ မိမိရဲ့ခြေဖဝါးဖြင့် အထက်အောက်စပြီးပွတ်ပေးလိုက်တော့ ကိုကိုလွင့် လီးကြီးမှာ နူးညံ့သော အထိအတွေ့များကြောင့် အလွန်ပင်မာကြောပြီး တဆက်ဆက်တောင်လာသည်။
“အား…”“ကောင်းလိုက်တာ နန်း ရယ်”“နန်း ရဲ့ ခြေဖဝါးလေးကို လိုးရတာ ကောင်းလိုက်တာကွာ”“အို”သူမရဲ့ ခြေဖဝါးလေးကို သူက လိုးရတာကောင်းတယ်ဆိုပါလား။နန်းသူဇာ လည်း ဖိပြီးပွတ်ပေးနေလေသည်။ခဏကြာတော့ ကိုကိုလွင်က နန်းသူဇာကို ဆွဲထူပြီး နီစွေးပြီး ပါးလျသော နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာနားမှာ လီးထိပ်ကို ဖြဲပြီး တေ့ပေးလိုက်သည်။“ဘာလုပ်မလို့လဲ”“အု…အု…”ဟလာသော နှုတ်ခမ်းလေးထဲသို့ ကိုကိုလွင်ချက်ခြင်းပဲ လီးကို ထိုးထည့်လိုက်သည်။နန်း ရယ် ကို့ကို စုပ်ပေးနော်။ စုပ်ပေးပါနော်။နန်းသူဇာ တစ်ခါမှ မစုပ်ဘူးသဖြင့် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိပေ။သူ့ရဲ့ လီးကလည်း ပါးစပ်ထဲမှာ ပြည့်နေသည်။ မာလိုက်တာကလည်း အသားချောင်းကြီးလိုပဲ။ နန်း ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ရှေ့နောက် ဖိပြီးစုပ်။ နောက်ပြီး လျှာလေးနဲ့ ကို့အတန်ကို ကလိ။
“ပြွတ်…ပြွတ်…ပြွတ်…”နန်းသူဇာ သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း တပြွတ်ပြွတ်နေအောင် ပြန်စုပ်ပေးမိသည်။ပါးစပ်ထဲမှာ သူ့ကြီးက တဆက်ဆက်နဲ့ ဖြစ်နေအောင်ကို စုပ်ပေးနေမိတာပေါ့။သူကတော့ နန်းခေါင်းလေးကို ကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့ နန်းပါးစပ်လေးကို လုပ်နေတယ်ထင်တာပဲ။“ပြွတ်…ပြွတ်…”သူမရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို မရွံ့မရှာနဲ့ ယက်ပေးသလို သူမလည်းသူ့ကို ပြန်ပြီးစုပ်ပေးနေမိသည်။မစုပ်တတ်စုပ်တတ် စုပ်ပေးနေတဲ့ နန်းသူဇာရဲ့ နုနယ်သောမျက်နှာလေးကို ကြည့်ပြီး ကိုကိုလွင် ဖီးတက်နေသည်။
“အား…”“နန်း…ရယ်”“အချစ်ရယ်”“အရမ်း ကောင်းတယ်ကွာဘလွတ်”ကိုကိုလွင် ပြီးချင်လာသဖြင့် နန်းသူဇာ ပါးစပ်ထဲကနေ လီးကိုအပြင်ထုတ်လိုက်သည်။နန်းသူဇာ ခဗျာ ပါးစပ်လေးဟပြီးကျန်နေခဲ့သည်။“နန်း”“ကို့ကို ကုန်းပေးပါ့လား”ချစ်မိသွားပြီဆိုတော့လည်း နန်းသူဇာ ဘာမှမပြောတော့ပဲ သူ့စိတ်ကြိုက် ကုန်းပေးလိုက်သည်။သူ့ရှေ့မှာ ကိုယ်လုံးတည်းလေးနဲ့ ကုန်းပေးထားတော့ ရှက်တာပေါ့။နန်းသူဇာရဲ့ အိုးကတော့ လုံးပြီးတင်းနေသည်။“နန်း”ခါးကို နည်းနည်းလေးနှိမ့်ပြီး ဖင်ကိုကော့ပေးထား။
နန်းသူဇာရဲ့ နောက်ကနေ စိတ်ကြိုက်အနေထားဖြစ်အောင် ကိုကိုလွင် ခိုင်းလိုက်သည်။စကုန်းလိုက်တည်းက ပန်းရောင်သန်းနေသော ဖင်ဝလေးကို ကိုကိုလွင်မြင်လိုက်ရသောကြောင့် ဖင်လိုးဖို့အကောင်းဆုံးအနေအထားရောက်အောင် ခိုင်းလိုက်ခြငိးဖြစ်သည်။ပထမကတော့စောက်ဖုတ်လေးကို လိုးမလို့ပါ။ နန်းသူဇာရဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို ဦးမော်ကြီးက ဒီကုတင်မွေ့ယာပေါ်မှာ ယူခဲ့မှာပဲဆျုတာတွေးပြီး သူလည်း နန်းသူဇာရဲ့ ဖင်အပျိုရည်လေးကို ဒီကုတင်မွေ့ယာပေါ်မှာ ယူချင်တာကြောင့် စိတ်ကူးပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။စိတ်ကြိုက်အနေထားရောက်နေပြီဖြစ်သော နန်းသူဇာကို နောက်ကနေပြီး လက်တစ်ဖက်က စောက်ဖုတ်လေးကိုပွတ်ပေး ဖင်ဝလေးကို ရှာဖျားလေးနဲ့ ထပ်ပြီး သတွေးစွတ်လိုက်သည်။
ဖင်ဝလေးကိုထပ်ပြီး အယက်ခံလိုက်ရသဖြင့် နန်းသူဇာ ဖင်လေးတွေတုန်ခါသွားအောင် လူးလွန်းသွားသည်။ ဖင်ဝလေးမှာ သတွေးလေးတွေနဲ့ စိုနေပြီး ဖင်အဆီလေးတွေလည်း ထွက်လာတော့ လီးဒစ်ကိုဖြဲလိုက်ပြီး ဖင်ထဲကို ဒစ်မြုပ်အောင် ထိုးထည့်လိုက်တော့သည်။ဗျစ်”“အား…အမလေး…”“ကိုကိုလွင်…အား…အပေါက်မှားနေတယ်…”“အမလေး…ဖင်ကွဲသွားပြီလားမသိဘူး”ဖင်ထဲ ဒစ်မြုပ်သွားမှတော့ ကိုကိုလွင် ထုတ်မပေးပဲ နည်းနည်းချင်း ဖိလိုးပြီး ထိုးထည့်သည်။ ရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားနေသော နန်းသူဇာရဲ့ ခါးသေးသေးလေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုံကိုင်ပြီး ထိန်းထားသေးသည်။
“မရဘူး နာတယ်”“အဲဒီအပေါက်ကို မလုပ်ပါနဲ့တော့”“ဟို ဟာကိုပဲလုပ်ပါ”“အီး…ဟီး…ဟီး…”နန်းသူဇာ နာလွန်းစပ်လွန်းသဖြင့် ငိုပြီးပြောလေတော့သည်။ လီးကလဲ ဖင်ဝထဲမှာ ပြည့်ကြပ်နေသည်။ဒစ်…ဒစ်…ဗျစ်…ဗျစ်„”ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး လှုပ်ရှားအောင်ငိုနေသဖြင့် လီးကို ဖင်ထဲသို့ပိုဝင်အောင် နှဲ့သွင်းသလို ဖြစ်နေသည်။ကိုကိုလွင်လည်း အားမလိုအားမရပိုဖြစ်မလာပြီး လီးကို အဆုံးထိရောက်အောင် ခါးကိုကိုင်ထားသော လက်ကိုအားစိုက်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တော့သည်။
“ဖြစ်…ဗျစ်…”ပန်းရောင်သန်းနေသော ဖင်ဝလေးပါ ချိုင့်ဝင်သွားသည်။ နန်းသူဇာလေးကတော့ အဆက်မပြတ်ငိုနေရတော့သည်။ဗျစ်…ဒုတ်…”“ဗျစ်…ဒုတ်”“နန်း ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို ဦးမော်က ဒီမွေ့ယာပေါ်မှာ ပထမဆုံးစလိုးသလို။ ကိုလည်း “နန်း”ရဲ့ ဖင်ကို ဒီမွေ့ယာပေါ်မှာ ပထမဆုံးဖြစ်အောင် လိုးချင်လို့ပါ “နန်း”ရယ်။ပထမဆုံးဖြစ်အောင် လိုးချင်လို့ပါ“နန်း”ရယ်…နော်…နော်”အဲဒီလိုပြောပြောပြီး နန်းသူဇာရဲ့ ဖင်သားလေးများတုန်ခါသွားအောင် ကိုကိုလွင် ဆောင့်ဆောင့်လိုးတော့သည်။
လိုးခံနေရသည့်ဖင်ကလည်းနာတာလိုလိုကောင်းတာလိုလိုနဲ့ စောက်ပတ်လေးကတော့ယားပြီးစောက်စိလေးကတော့အပြတ်ကိုတဆက်ဆက်နဲ့တောင်နေသည်ပြီးခါနည်းနေပြီကိုကိုလွင်ကတော့သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး နေရာမကျန်အောင်လုပ်တတ်သည့် သူပါလားလို့ တွေးမိပြန်သည်။ကြပ်ထုပ်နေသောဖင်ဝလေးရဲ့ညှစ်နေတဲ့ ဒဏ်ကို ကိုလွင်လွင်တစ်ယောက်ကောင်းကောင်းကြီးခံစားနေရသလိုဖင်ကိုလိုးတာပထမဆုံးခံပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရသာတွေ့တွေ့လာတဲ့ နန်းသူဇာတို့ နှစ်ယောက် ကာမပန်းတိုင်ကို အတူတူတက်လှမ်းဖို့ ကြိုးစားနေကြသည်။
“အင့်…”“အား…အီး…”“ဗျစ်…ဗွက်…”ကိုကိုလွင်တစ်ယောက် နန်းသူဇာရဲ့ ဖင်ထဲသို့ သုတ်ရည်များ ပြည့်လျှံအောင် ပန်းထည့်လိုက်သလို နန်းသူဇာလည်း စောက်ပတ်လေးထဲမှ စောက်ရည်လေးများ ရွှဲနေအောင်ထွက်ကျသွားသည်။“ပလွတ်…”“ဗွက်…”လီးထဲမှသုတ်ရည်များ ဖင်ထဲသို့ ကုန်စင်အောင်ထည့်ပြီးမှ စွဲထုတ်လိုက်သည်။ နန်းသူဇာရဲ့ ခါးလေးကို ကိုင်ထားတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကိုလွှတ်လိုက်ရာ နန်းသူဇာလည်း ပျော့ခွေသွားပြီး မွေ့ယာပေါ်သို့ ကျသွားသည်။
“နန်း” “ကို့ ကိုချစ်လားဟင်”“ပြောစရာလိုသေးလို့လား”“လူတစ်ကိုယ်လုံး ခြေဖဝါးရော၊ဖင်ရော ရှိတာတွေအကုန်လုံးနေရာမကျန်လုပ်ပြီးတော့မှ”နန်း”ရဲ့ယောက်ျားထက်ကို့ကိုပိုမချစ်ဘူးလား”“သူ့ထက်ပိုချစ်လို့လည်း ရှင်လုပ်သမျှတွေကို ခံနေတာပေါ့။”“ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားတွေက ရှင့်အပေါ်မှာပဲ အကုန်လုံးပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီ”။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged သူဌေးသမီး သူဌေးမယား